United Arab Emirates - Nhungamiro yeMatsotsi | Dubai & Abu Dhabi
Yakabudiswa na Dubai City Company at September 27, 2019
United Arab Emirates - Nhungamiro for Expats. Abu Dhabi ndiye akakura pane ese emanu emirates ane nzvimbo ye67,340 square kilomita, akaenzana ne86.7 muzana yenzvimbo yakazara yenyika, kusasanganisa zvitsuwa. Iyo ine mhenderekedzo inosvika kune anopfuura 400 makiromita uye yakakamurwa nekuda kwekutonga kumatunhu matatu makuru.
Nzvimbo yekutanga inokomberedza guta re Abu Dhabi rinova riri mbiri guta guru emirate uye guru remubatanidzwa. Sheikh Zared, Mutungamiriri we Brazil anogara pano. Zvivakwa zveParamende zvinosangana nemakurukota ehurumende, mazhinji emasangano pamwe nemasangano, vamiriri vedzimwe nyika, nzvimbo dzekutepfenyura, uye mazhinji emakambani emafuta ari zvakare mu Abu Dhabi, ino zvakare imba yeZared University uye iyo yepamusoro Makoreji eTekinoroji.
Nzvimbo huru dzekuvakisirwa dzimba dzinosanganisira Mina (Port) Zared uye Abu Dhabi International nhandare yendege. Guta iri zvakare riine nzvimbo dzakakura dzetsika, zvemitambo uye nzvimbo dzekuvaraidza, pamwe neinoshamisa Abu Dhabi Corniche iyo inopa makiromita akawanda ekufambisa pasina njodzi, bhasikoro Architiki kutaura guta racho zvakare zvinonakidza nzvimbo ipo zvivakwa zvekare senge masisitetiki madiki akachengetedzwa uye anogara zvakanaka mumumvuri wezvemazuva ano skyscrapers.
Dunhu rechipiri raA Abu Dhabi, rinozivikanwa seEast Province, rine guta guru reAl Ain. Iyi nharaunda yakaorera ine hupfumi hwakawanda hwakawanda nemapurazi, mapaki eruzhinji uye nzvimbo dzakakosha dzekuchera matongo. Rakaropafadzwa zvakare nehupfumi hwepasi pevhu zviwanikwa izvo zvinofashaira mumatsime akawanda emhizha. Pfungwa dzinonyanya kufarira dunhu rino iAin Al Faydah Park, Jebel Hafit, nzvimbo yekuzorora paAl Hili, Al Ain Zoo uye Al Ain Museum. Iyi zvakare inzvimbo yetsika uye yekudzidzisa uye saiti yeUAU yekutanga yunivhesiti, iyo UAE University, iyo inosanganisira pakati pemazhinji ayo ehupfumi chikoro chakasimba chekurapa. Kufambisa kwemukati kunofambiswa neyemhando yepamusoro nzira uye Al Ain yakabatana kune nyika yekunze kuburikidza neAl Ain International Airport.
United Arab Emirates - Nhungamiro yeMatsotsi!
Dunhu reWestern muUAE
Dunhu reWestern, iyo yechitatu emirate's third Administrative chikamu, inosanganisira 52 misha uye ine seguta rayo Bida Zared, kana Zared City. Kuwedzeredzwa kwemasango kunofukidza chero mahekita 100,000, kusanganisira anopfuura mamirioni 20 evergreens. Minda mikuru yemafuta epasi pemahombekombe iri pano, sezvinoitwa zvikuru kuchenesa mafuta, paAl Ruwais.
Pamusoro pematunhu matatu makuru e Abu Dhabi kune chitsuwa chakakosha mukati mevamiririri vanosanganisira Das, Mubarraz, Zirku uye Arzanah, padyo neminda yemafuta emahombekombe. Dziva riri padyo neDalma, Sir Bani Yas, Merawah, Abu al-Abyadh naSaadiyat, pamwe nezvimwe zvitsuwa zvakawanda.
Emirate of Dubai inokwira nemahombekombe eArabhuan Gulf eUAE kwemakiromita 72. Dubai ine nharaunda c. 3,885 square kilometres, yakaenzana ne5 muzana yenzvimbo yakazara yenyika, kusasanganisa zvitsuwa.
Dubai city yakavakwa padivi pemucheto wehurefu we10-kilomita pakureba, mhepo inodzika iyo inokamura chikamu chekumaodzanyemba kweBur Dubai, mwoyo weguta, kubva kunzvimbo yekuchamhembe kweDeira.
Hofisi Yemutongi, pamwe nemahofisi makuru mazhinji emakambani makuru, Port Rashid, iyo Dubai World Trade Center, tsika, nhepfenyuro nenzvimbo yepasirese masimba ese ari muBur Dubai. Deira inzvimbo yekutengeserana inobudirira ine huwandu hwakakura hwekutengesa, misika, mahotera uye Dubai International Airport. Bur Dubai uye Deira zvakabatanidzwa neAl Maktoum uye Al Garhoud mabhiriji, pamwe neAl Shindagha tunaki inopfuura nepasi pemvura.
Jebel Ali, musha wechiteshi chakakura chakagadzirwa nevanhu, une nzvimbo huru kwazvo yekutengeserana muArabhiya mune runyorwa rwemakambani epasi rese ayo anoshandisa nzvimbo yekugadzira uye senzvimbo yekugovera.
Jumeirah beach inzvimbo huru yekushanya ine huwandu hunoshamisa hwekupa muhotera mahotera uye nzvimbo dzemitambo.
Mukati, guta remakomo reHatta inzvimbo inoshamisa kwazvo. Pedyo nedziva dziva, Hatta Fort Hotel yakaiswa munzvimbo yakakura yepaki uye inopa hwaro hwakakwana hwekutsvaga wadis nemakomo, ayo anopfuurira munzvimbo yeOmani.
Emirate yeSharjah inosvika pamwe chete ne16 makiromita eUA's Gulf pamhenderekedzo uye kune anopfuura 80 makiromita kupinda mukati. Pamusoro pezvo kune matatu matura aSharjah ari pamhenderekedzo yekumabvazuva, kumiganhu neGulf of Oman. Aya ndiKalba, Khor Fakkan naDibba al-Husn. Emirate ine nharaunda ye2,590 skwele makiromita, yakaenzana ne3.3 muzana yenzvimbo yakazara yenyika, kusanganisa zvitsuwa.
Iro guta guru reSharjah, iro rinotarisa Arabian Gulf, rine makuru ekutangisa uye ekushambadzira dzimba pamwe chete neakanyanya kufadza marongero ezvetsika nemadziro zvirongwa, kusanganisira miziyamu yakawanda. Misiyano yakasarudzika ndiyo miviri mikuru yakafukidzwa souqs, inoratidza dhizaini yeIslam; nzvimbo dzinoverengeka dzekutandara uye nzvimbo dzinowanikwa veruzhinji dzakadai seAl Jazeirah Fun Park uye Al Buheirah Corniche. Guta iri rinozivikanwa zvakare nemisikiti yaro yakawanda yakaisvonaka. Zvinongedzo pamwe nenyika dzekunze zvinopihwa neSharjah International Airport nePort Khalid.
Sharjah zvakare inokomberedza dzimwe nzvimbo dzinokosha dzeoasis, inozivikanwa kwazvo iine Dhaid umo hwakawanda miriwo nemichero inodyarwa paivhu rayo rakaorera uye rakaorera. Khor Fakkan inopa Sharjah nechiteshi chikuru chekumabvazuva kumahombekombe. Zvitsuwa zviviri zvekumahombekombe ndezveSharjah, Abu Musa, izvo zvave zvichitongwa nemauto neIran kubvira 1971, naSir Abu Nu'air.
Ajman, iri chinhambwe chinhambwe kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweguta nyowani reSharjah, ine yakaisvonaka 16-kilomita yakatambanudzwa yeyera jecha. Iyo idiki emirate maererano nehukuru hwayo hwepanyama, inofukidza anenge 259 masikweya emakiromita, yakaenzana ne0.3 muzana yenzvimbo yakazara yenyika, kusanganisa zvitsuwa.
Guta guru, Ajman, rine nhoroondo nhare muzinda wayo. Izvi zvakagadziridzwa nguva pfupi yadarika uye ikozvino inogara inonakidza museum. Pamusoro pehofisi yoMutongi, makambani akasiyana-siyana, mabhangi uye nzvimbo dzezvokutengeserana, emirate yakakomborerwa zvakare nechiteshi chechisango umo Port yeAjman iri. Masfut musha wekurima uri mumakomo 110 makiromita kumaodzanyemba kwakadziva kumaguta, nepo nzvimbo yeManama iri makiromita anenge 60 kumabvazuva.
Emirate ye Umm Al Qaiwain, iyo ine mahombekombe akareba kusvika 24 makiromita, iri pamhenderekedzo yeArabian Gulf yeUAE, pakati peSharjah kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero, neRas al-Khaimah kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva. Muganhu wayo wakadzika uri pamakiromita e32 kubva kumahombekombe egungwa. Nzvimbo yakazara yeamirate ndeye 777 square kilometres, yakaenzana ne1 muzana yenzvimbo yakazara yenyika, kusasanganisa zvitsuwa.
Guta reUm Al Qaiwain, guta guru emirate, riri pane peninsula yakatetepa iyo inokomberedza nzvimbo yakakura ye1 kilomita pakureba ne5 makiromita marefu. Hofisi yoMutongi, nzvimbo dzekutungamira uye dzekutengesa, chiteshi chikuru uye Mariculture Research Center uko prawns nehove dzinovakirwa panzvimbo yekuedzwa, zviripo pano. Guta rinewo zvakasara zvakachengetedzwa zvekare nhare, suo rayo rakakura rakazadzwa nemadziviriro ezvidziviriro.
Falaj al-Mualla, inoratidzika yemusango oasis, iri 50 makiromita kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweMum Al Alaiwain guta. Sinayah chitsuwa, chakarara chinhambwe kure kwemahombekombe ane akakosha mango nzvimbo nenzvimbo yekuberekesa yeSorotra cormorants.
Ras Al Khaimah, anonyanya kusimuka kuchamhembe kumahombekombe eUA kumadokero, ane mahombekombe anenge 64 makiromita paArabian Gulf, inotsigirwa neiyo yakaorera hinterland, ine inoparadzaniswa yakadzika mukati memakomo Hajar makomo kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva. Mativi ese emirate anogovana miganhu neSultanate yeOman. Kunze kwenzvimbo yayo huru, Ras Al Khaimah inenzvimbo dzinoverengeka dzezvitsuwa zvinosanganisira izvo zveGreater uye Chidiki Tunb, inogarwa neIran kubvira 1971. Iyo nharaunda yemirate ndeye 168 square kilomita, yakaenzana ne2.2 muzana yenzvimbo yakazara yenyika, kusasanganisa zvitsuwa.
Guta reRas Al Khaimah rakakamurwa kuita zvikamu zviviri na Khor Ras Al Khaimah. Muchikamu chekumadokero, chinozivikanwa seOld Ras Al Khaimah, vari Ras Al Khaimah National Museum uye akati wandei madhipatimendi ehurumende. Chikamu chekumabvazuva, chinozivikanwa saAl Nakheel, chine hofisi yeMutongi, madhipatimendi ehurumende akati wandei nemakambani anotengesa. Izvo zvikamu zviviri zvakabatana nebhiriji rakakura rakavakirwa mhiri kwekhor.
Khor Khuwayr inzvimbo yekumaindasitiri iri munzvimbo dzinosvika 25 makiromita kuchamhembe kweguta reRas Al Khaimah. Pamusoro peiyo huru simenti, mabwegi uye emabhizimusi emarble, iri zvakare nzvimbo yePort Saqr, nzvimbo huru yekutengesa kune emirate uye yekare tsika yekuraurisa yeRams. Dunhu reDigdagga, kune rimwe divi, inzvimbo inozivikanwa yekurima uye inogara fekitori yeJulphar yemishonga, yakakura kwazvo muArabian Gulf.
Mamwe madhiri akakosha mukati memamirate anosanganisira: Al-Hamraniah, nzvimbo yekurima uye zvakare nzvimbo yeRas Al Khaimah International Airport, Khatt, nzvimbo yekushanyirwa inozivikanwa nekuda kwematsime ayo anodziya, Masafi inozivikanwa chaizvo nemichero yayo uye matsime ezvisikwa. uye Wadi al-Qawr, mupata unokwezva mumakomo ekumaodzanyemba.
Kunze kwekushayikwa kwemamwe madiki akavakirwa kuSharjah, Fujairah ndiye ega emirate ari mugomo reGulf of Oman. Mahombekombe ayo anodarika 90 makiromita pakureba uye nzvimbo yarwo yakatamba yakakosha mukukudziridza kwayo. Iyo nharaunda yemirate ndeye 1165 square kilomita, yakaenzana ne1.5 muzana yenzvimbo yakazara yenyika, kusasanganisa zvitsuwa.
Guta reFujairah, guta guru emirate, inokurumidza kukura nzvimbo iyo ine hofisi yeMutongi, madhipatimendi ehurumende, makambani mazhinji ezvekutengesa uye nehuwandu hwemahotera, pamwe nendege uye nePort of Fujairah, imwe yemafuta epamusoro epasi pano chiteshi.
Hunhu hwenyama hwe emirate hunoratidzwa neakadzika makomo eHajar makomo ayo akaganhurana bani rakaorera remahombekombe kwaro kwagara kwakawanda kwakaitika. Yakaropafadzwa inonakidza nzvimbo, Fujairah yakanyatsoiswa kuti ienderere mberi kuvaka pane yayo yekutengesa kushanya. Zvinonakidza zvinosanganisira mamwe akanakisa kudhiraivhu nzvimbo, runako rwemakomo rwemakomo nemahombekombe, tsika uye nhoroondo zvinokwezva uye, hongu, yakavimbika nguva yechando zuva.
Guta rine nhoroondo reDibba al-Fujairah, kuchamhembe kwemupendero wehumir, inzvimbo yakakosha mune zvekurima nekuredza, nepo musha weBidiya uine musikiti woga woga woga unotongwa mana iyo iri yekare kwazvo munyika.
Chii chinoitika kana iwe uri Kunyoresa na Dubai City Company
Iyo UAE Hurumende
Pasi peUAE hurongwa hwehurumende, Mutungamiriri weNyika anosarudzwa nemuviri unozivikanwa seDare Repamusoro reVatongi. Dare Repamusorosoro ndiro bato repamusoro rekugadzira sarudzo muUAE, uye Mutungamiriri neMutevedzeri Vemutungamiriri vanosarudzwa vari vaviri kubva munhengo yavo kwemakore mashanu.
Dare Repamusorosoro rine zvese zviri pamutemo uye masimba masimba. Pamusoro pekuronga nekubvumidza mitemo yemubatanidzwa, Dare Repamusoro rinotendera Mutungamiriri akasarudzwa Mutungamiri uye akashongedzerwa kubvuma kusiya chigaro, kana zvichidikanwa.
Prime Minister anogadzwa neMutungamiriri. Anobva agadza Dare revashandi, kana kuti Kabhurawu, kuti itungamirire kuvandudzwa uye kuitiswa kwemisangano yemubatanidzwa mumapato ese ehurumende.
Pamusoro peDare Repamusoro uye Kanzuru yeVashandi, 40-nhengo yeparamende inozivikanwa seFederal National Council (FNC) inoongororawo yakatsanangurwa mutemo mutsva uye inopa zano kuAU Cabinet, sezvaidikanwa. Iyo FNC inopihwa simba rekufona uye kubvunza Maturukota maererano nemaitiro avo, ichipa imwe dhigirii rekuzvidavirira kuhurongwa. Zviitiko zvinokatyamadza zvekuvhura kuita sarudzo kwakaitwa muna Zvita 2006, nesarudzo yekutanga isina kunangana yenhengo dzeFNC. Pakutanga, nhengo dzese dzeFNC dzakagadzwa neVatongi veEmirate yega yega.
Kuunzwa kwesarudzo dzisina kunangana kunomiririra kutanga kwegadziriro yekuvandudza iyo UAE maitiro ehurumende. Pasi pekuchinja uku, Mutongi mumwe nemumwe anosarudza koreji inosarudzwa iyo nhengo dzayo dzinokwana 100 kakapetwa nhamba yenhengo dzeFNC dzakabatwa naEmirate uyo. Nhengo dzekoreji imwe neimwe dzinobva dzasarudza hafu yenhengo dzeFNC, imwe hafu ichipfuurira kugadzwa neMutongi wega wega. Maitiro acho akaguma neFNC umo chikamu chimwe chete muzvishanu pamitezo yawo vakadzi.
Zvirongwa zvenguva yemberi zvinotarisirwa kuwedzera kukura kweFNC nekusimbisa kudyidzana pakati payo neDare reVashandi, kuwedzera hunyanzvi, kuzvidavirira uye maitiro ehurumende muAFA. MunaNovember 2008, mazwi enhengo dzeFNC akawedzerwa kubva pamakore maviri kusvika mana, ayo achiwirirana nemamwe mvumo yepasi rose. Pamusoro pezvo, hurumende ichazivisa kuFNC nezve zvibvumirano zvakatemerwa nyika nezvibvumirano, uye zvibvumirano izvi zvichakurukurwa neFNC vasati vapihwa chibvumirano.
Nhoroondo, nharaunda yezvematongerwo enyika yeAFA yakave yakafarikanywa nerudo rukuru kune hutungamiri hwenyika uye masangano ehurumende. Izvi zvakanyanya kupindura kukurumidza kukura uye kukura iyo UAE yakasangana pasi pekutungamira kwavo mumakumi emakore apfuura.
Iyo UAE Nhoroondo & Nhaka
Munhu akatora nyika inozivikanwa seUnited Arab Emirates (UAE) kwemazana ezviuru zvemakore uye, zvechokwadi, nzvimbo yacho inogona kunge yakakoshesa basa rekufambisa kweMurume wekutanga kubva muAfrica kuenda kuAsia. Nekufamba kwenguva nzvimbo dzakachinja zvakanyanya. Around 7500 makore apfuura, mamiriro ekunze akange akaomarara uye kune humbowo hwakakosha hwekugara kwevanhu, asi neinenge 3000 BC mamiriro ezvinhu akange ave akawedzera kwazvo, nemhedzisiro yekuti kurima kwakavharwa zvakanyanya munharaunda dzakavakirwa zveoasis.
Kutengeserana kwemidziyo kwakavambwa kubva pachinhanho chepakutanga uye mhangura yaitakurwa kubva kuMakomo eHajar kuenda kunzvimbo dzekumaguta kuchamhembe kutanga kwe3000 BC, kubva kwayakatumirwa kuMesopotamia. Makamera anofamba nenzira dzekumhanya kubva mudunhu kubva kuchamhembe kuenda kumaodzanyemba yakapa imwe nzira inoenda kuIndia. Doko rakadai saJulfar (Ra's al-Khaimah) rakazopedzisira rabudirira zvikuru, nekuda kwekutengeserana kweparera.
Muzana ramakore regumi nematanhatu, kusvika kwePutukezi muGulf kwakakonzera nyonganiso huru kumakona ekumabvazuva-pamhenderekedzo akadai saDibba, Bidiyah, Khor Fakkan neKalba. Asi mukutanga kwezana ramakore regumi nemapfumbamwe, dzinza remuno, iyo Qawaisim, yaive yakavaka ngarava dzezvikepe zvinopfuura makumi matanhatu uye zvakapotsa zvaita 20,000 vafambisi - zvakaringana kutsamwisa Britain yekudzora nzira dzekutengeserana kwemakungwa pakati peGulf neIndia.
mabviro Souks yeOld Dubai
Pakutanga kwe1790s, iro guta reA Abu Dhabi raive rakakosha nzvimbo yemuchinda zvekuti mutungamiri wemadzinza eBani Yas, sheikh weAl Bu Falah (ane chizvarwa, Al Nahyan, ndivo vatongi varipo veA Abu Dhabi), vakatamira ipapo kubva kuLiwa Oasis, mamwe ma 150 makiromita kumaodzanyemba-kumadokero. Makumi mashoma emakore akazotevera, nhengo dzeAl Bu Falasah, rimwe bazi reBani Yas, ndokugara pamharadzano muDubai, kwavanoramba vachitonga nhasi semhuri yeAl Maktoum.
Kubata hove kwePearl kwakaramba kuchikura, asi pakupedzisira Hondo Yenyika Yekutanga, kushushikana kwehupfumi kwema1930, uye kuumbwa kweJapan pearl yakasarudzika kwakaita kuti kutengeserana kuderere - nekukanganisa hupfumi hwenyika.
Nama1950s, zvakadaro, kwakauya kuwanikwa kwemafuta, uye pa6 Nyamavhuvhu 1966, His Highness (HH) Sheikh Zared bin Sultan Al Nahyan akava Mutongi wa Abu Dhabi. Saka yakatanga nguva yekuronga kwakanyanya uye kusimudzira, uko Abu Dhabi, uye pakupedzisira iyo UAE yese, yakatanga kubata pasi rose maererano nehunyanzvi uye nekusimba kwehupfumi. Pa 2 Zvita 1971, bumbiro remubatanidzwa rematanhatu nyika dzinozivikanwa seUnited Arab Emirates rakagadzwa zviri pamutemo. Izvi zvaisanganisira Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, uye Fujairah. Sheikh Zared akasarudzwa seMutungamiri uye HH Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, Mutongi weDubai, saMutevedzeri weMutungamiri. Iye wechinomwe akasiya, Ra's al-Khaimah, akabatana neFederal mu1972.
Hapana mubvunzo kuti budiriro, kuwirirana uye kusimukira kwemazuva ano izvo zvinozivikanwa neUAE, zvakanyanya kwazvo, nekuda kwechikamu chekuumba chakaitwa namadzibaba anotanga enharaunda. Mu2004, Sheikh Zared akamiswa semutungamiriri weUAE uye seMutongi weA Abu Dhabi nemwanakomana wake wedangwe, HH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Nheyo nehungwaru zvaakaunza kuhurumende, zvakadaro, zvinoramba zviri pamwoyo weRusununguko nemafambisirwo azvo nhasi. Mushure mekufa kwemunin'ina wake, Sheikh Maktoum, mu2006, HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Mutongi weDubai, akasarudzwa seMutevedzeri weMutevedzeri weUAE uye Prime Minister.
Kunobva: UAE2010 Yearbook - UAE National Media Council
Hutungamiri hwezvematongerwo enyika hweAU hunoshanda mukati mehurongwa hwekunze hwekunze hwakagadzwa neMutungamiriri weHurumende, HH Sheikh Zared bin Sultan Al Nahyan. Iyi nzira inosimbisa kudyidzana, kutaurirana uye tsitsi. Iyo UAE inorangarira kuzvipira kwayo kune vavakidzani vayo pamwe nenyika dzepasi rose nezverunyararo rwedunhu, kugadzikana uye kuchengetedzeka kune vese. Kuti uwane zvinangwa izvi, zvakasimudzira nechinangwa mabhiriji, kushandira pamwe uye kutaurirana. Kuvimba nezvishandiso izvi zvekubvumirana kwakabvumidza Hurumende kuti ifambise hukama hunobudirira, hwakaringana uye hwakaenzana nevepasi rose.
Nhungamiro inotungamira yeAUE bumbiro rekunze chitendero mukudiwa kweruramisiro mukudyidzana nedzimwe nyika pakati penyika, kusanganisira kukosha kwekuremekedza musimboti wekusapindira mune zvematongerwo enyika dzedzimwe nyika. Iyo UAE zvakare yakazvipira kugadzirisa murunyararo gakava, uye inodzosera masangano epasi rese kusimbisa hutongi hwemitemo yenyika pamwe nekuitwa kwezvibvumirano nezvibvumirano.
Chimwe chezvinhu zvepakati peUSE's yekune dzimwe nyika kwave kusimudzira hukama hwepedyo nevavakidzani muArabian Peninsula kuburikidza nenhengo nhanhatu yeGulf Cooperation Council (GCC). Munguva ye2009, kusimudzira muPalestine, Iraq, Iran, Yemen, Afghanistan nePakistan uye zvirongwa zvinofanirwa kubata navo zvakaumba musimboti wehurukuro yeAU nevatungamiriri venyika. Iyo UAE yakatsaurirwa rugare, chengetedzo uye kugadzikana mudunhu reArab, pamwe neyakagadzika hukama pakati penyika dzese, uye kururamisira uye kusingaperi kwechigakava cheMiddle East. Inotenda kuti runyararo harugone kuwanikwa ipo kugara kweIsrael Palestine nedzimwe nzvimbo dzeArabhu kuchiri kuenderera. Inotsigira kupera kwekugara kweIsrael nekugadzwa kwenyika yakazvimirira yePalestine, neEast Jerusalem senge guta rayo, mukati mechisungo chechibvumirano chakanangana neArabic Peace Initiative.
Iyo UAE yakurudzira chiitiko chenyika dzese kuti kusunungure kuvaka kwedzimba dzevaJudha kuWest Bank neJerusarema nechinangwa chekumutsiridza nzira yerunyararo rweMiddle East. Zvichakadaro, yakapa mhosva kurwiswa kweIsrael kuGaza uye kuratidza kubatana nemaPalestineans akakanganiswa nehondo. UAE yakapa pamusoro peDh11 bhiriyoni (US $ 3bn) kubatsira maPalestineans, kusanganisira mari yekuvandudza zvivakwa, dzimba, zvipatara uye zvirongwa zvechikoro. Uye zvakare, nyika yakapa Dh638.5 mamirioni (US $ 174mn) mukuvakazve Gaza.
Iyo UAE yanga iri mutsigiri anoshanda weHurumende yeIraq uye yakurudzira kuremekedza kutendeka kwenzvimbo yeIraq, huchangamire hwayo uye nekuzvimiririra. The Federation ine imwe yemashoma mashoma emumiriri eArabu anoshanda uye vagari mumiriri muBaghdad, uye yakadzima zvikwereti zvakakosha nezve Dh25.69 bhiriyoni (US $ 7bn) kutsigira kuedza kweIraq. Kunyangwe paine gakava riripo kwenguva refu neIran pamusoro pemubvunzo wezviwi zvitatu zvakatorwa muUAE zviwi uye kunetsekana nezvedanho renyukireya yeIran, iyo UAE yakaramba yakavhurika nzira dzese dzekudyidzana dzinovaka dzinogona kukonzeresa nzira yekuvandudza matanho ekuvaka uye kugadzirisa zvine rugare kune vese zvinetswa. The Federation inoramba ichipawo zvinobatsira pakuedza kwenyika dzese dzakanangana kudzamisa Afghanistan uye kutsigira danho rayo rekudzora kuchengetedzeka. Yakapa US $ 550 mamirioni mukubatsira kwevanhu nekusimudzira rubatsiro pakati pe2002 ne2008 uye ndiyo yega nyika yeArabhu inoita zviitwa zvevanhu pasi pano muAfghanistan.
Kunze kwedunhu iro pacharo, iyo UAE's yekune dzimwe nyika mutemo inoramba ichichinjika kuti iwane shanduko munharaunda yepasi rose. Sechikamu cherutivi rwayo rwemagariro, iri kuvaka hukama hwenyika mbiri pamwe neenyika mbiri pamwe neenyika dzakasimukira uye dzichiri kusimukira apo ichisimbisa hukama nemagungano eko kumadokero. Chinhu chakakosha cheAUE mutemo wekunze unoisa simbiso huru mukukudziridza kwekuwedzera kwekutengeserana pamwe nekudyara zvinongedzo nedzimwe nyika uye masangano pasi rese. Nzvimbo yeiyo Federation inokurumidza kukura senzvimbo yemari yedunhu reMiddle East yakawedzera kusimbisa nzvimbo yayo senhengo yenharaunda yepasi rose.
Nekuda kwekuti Asia yakayedza dambudziko rehupfumi richangobudirira kupfuura mamwe matunhu epasi, pakanga paine humbowo hwakakwana hwekuti dzimwe nyika huru dzeAsia dzichaita chinzvimbo chakasimba munyika. zvematongerwo enyika. Kuziva shanduko iyi, uye kuratidza shungu yekuwedzera batanidziro, hutungamiri hweAE hwakaramba huchivandudza hukama hwayo nedzimwe nyika dzeAsia, kusanganisira China neIndia. Imwe budiriro huru yemumiriri panguva ye2009, iyo yairatidzawo kukura kwedzimwe nyika, yakauya apo Abu Dhabi akasarudzwa kuti atore dzimbahwe reInternational Renewable Energy Agency (IRENA).
Iyo UAE yakaburitsa gwaro rehurongwa pamusoro pesimba renyukireya kune vanhu, shandisa ichisimbisa iwo marambiro ari pachena uye kugadzirira kwekutevedzera zvese zvinoenderana nekuchengetedza uye kuchengetedza matanho. Zvichakadaro, International Atomic Energy Agency's Board of Magavhuna yakabvumidza UAE kubvumidza yewedzerwa yekuongorora nyukireya inozivikanwa seKuwedzerwa Protocol, iyo inovimbisa kuzvipira kune Chibvumirano cheNyukireya Isiri kupfuuridzira. Imwe nzvimbo yakakosha yekudyidzana kweAFA yave iri mukurwira kwepasi rose nehugandanga, kusanganisira kuvhundutsirwa nehurumende.
Kunyangwe paine kukanganisika kwematambudziko emari uye ehupfumi padunhu rezvehupfumi pamwe nehurongwa hwekusimudzira, UAE yakaenderera mberi nezvirongwa zvekubatsira, kubatsira uye kusimudzira munyika dzakawanda. Kuedza kwayo mune izvi kwakabvumwa neMunyori Mukuru weUN, Ban Ki-moon, akarumbidza danho rayo revanhu nekushanda mukupedza kutambudzika kwevanhu munzvimbo dzakasiyana siyana panguva yenjodzi dzinongoitika dzoga uye nekunetsana kwevanhu.
Kubatsira kweAids kunodzorwa kuburikidza nemasangano anoverengeka akakosha, seI Abu Dhabi Fund for Development iyo, panguva ye2009, yakatsigira zvirongwa kuMorocco, Burkina Faso, Tanzania, Bangladesh, Palestine, Benin, Yemen, Afghanistan, Sudan, Eritrea nedzimwe; Red Crescent Authority (yemamwe emasangano epamusoro gumi eInternational Committee yeRed Cross), ayo mabasa anoshanda kwazvo anosanganisira kupa mvura yekunwa munyika dzakasakadzwa nekusanaya kwemvura nekuparadzwa, kupa zvipatara munzvimbo dziri kure dzenyika dzakasarudzika. inotarisana zvakanyanya nedzidzo yevana vari munyika dzine urombo. Uye zvakare, Noor Dubai, chirongwa chenyasha chepasi rose chekudzivirira uye kurapa kwekupofumadza uye kuona kwakaderera, inoshanda pamwe neWorld Health Organisation pamwe neInternational Agency for the Prevention of Blindness. Mumakore achangopfuura, kusimbiswa kwave kuri pakubatsira kwevanhu kune avo vakawirwa nenjodzi dzinongoitika dzoga kana kunetsana uye hurombo.
Pakazara, mukati memakumi matatu nehafu ekupedzisira makumi emakore iyo UAE yakabatsira kudarika Dh255 bhiriyoni (US $ 69.4 bn), mune zvikwereti, rubatsiro uye rubatsiro zvinopihwa panowanikwa hurumende-kune hurumende, iyo Federation iri zvakare mukuru anobatsira kumasangano ekunze, ave kuita Dh100 bhiriyoni (US $ 27 bn) kuwanikwa kuburikidza neInternational Monetary Fund uye World Bank. Iyo UAE Kunze Kwebatsiro Rubatsiro Office, yakagadzwa pamwe nekubatana neUN Hofisi yeCoordination of Humanitarian Affairs, ndiyo musangano wakasarudzika unozoendesa kuHurumende kuti ibatanidze mukubatsira nhanho yenyika dzakawanda, pane kutarisisa rutsigiro kuburikidza nevemunyika mbiri. zvinoreva.
Kunyangwe hazvo chokwadi chekuti UAE chava padanho rekudzoreredza nzira, chakakanganisika zvikuru nedambudziko reupfumi hwenyika munguva pfupi yapfuura. Zvisinei necushion yekutanga yakagadzirwa nemitengo yemafuta yakakwira, iyo Federation yakazokanganiswa nekuderera kwekudzikira kwepasirese izvo zvakakonzera kudzikira pakuda mafuta, ichidhonza mitengo kusvika pasi pechitatu chechikuru chavo cheJuly 2008. Kudzoreredzwa kwehuwandu hukuru hwemari yakazvimiririra yakatungamira kudzikira kwakapinza mumasokisi emisika yekutengesa. Zvakare, kuderera kwezvikamu zvekuvaka uye zvivakwa, mainstays eUAE kuwedzera kwehupfumi, zvaireva kuti kukura mu2009 kwaive kudzikira zvakanyanya kubva makore apfuura. Muna Gumiguru 2009, Ministry of Economy yakafanotaura kukura kwe 1.3 chete muzana pagore.
Mafananidzo e2009 aive mune yakasarudzika akasiyana neiyo e2008, apo kukura muAFA gross yemukati chigadzirwa (GDP) yakasvika 7.4 muzana. Kutungamira iyo yekukwira yaive chikamu cheoiri uye gasi, iyo yakawedzera ne35.6 peresenti, nekuda kwechikonzero chekuwedzera kwemitengo yemafuta. Mamwe matunhu akasimba ekukura mu2008 aisanganisira iyo indasitiri yekuvaka (26.1 muzana), maindasitiri ekugadzira (17.2 muzana), chikamu chezvemari (15.9 muzana), kutengeserana kutengesa uye kugadzirisa mabasa (18.7 muzana), uye neresitorendi kutengeserana kwehotera (15.1 muzana).
Mu2008, iyo UAE yekutengeserana mubhadharo yakawedzera ne35.3 peresenti, kubva Dh170.85 bhiriyoni (US $ 46.5 bn) mu2007 kusvika Dh231.09 bhiriyoni (US $ 62.9), nekuda kwechikonzero chikuru chekusimuka kwe33.9 muzana mukukosha kwezvinhu zvinotengeswa uye kutengeswa kunze kwenyika. uye iyo 39.7 muzana inokwira mukukosha kwemafuta anotengesa kunze, pamwe chete ne37.1 muzana inowedzera mukukosha kwegesi inotengesa kunze. Mahara ekutengeserana emahara akaona 16.4 muzana inowedzera kubva kunze, iyo yasvika Dh97.46 bhiriyoni (US $ 26.6 bn) mu2008. Zvichakadaro, kutumira kunze kwenyika kwasvika Dh 345.78 bhiriyoni (US $ 94.2 bn); kusimuka kwe33.4 muzana. Kuwedzera kudikanwa kwemumba nekuda kwekuwedzera kwehuwandu uye huwandu hwemari, pamwe nekukura kwakanaka mukutengesazve kwekutengesa kunze, kwakabatsira kusundira kukosha kwezvinhu zvinopinda ne33.4 muzana kusvika Dh735.70 bhiriyoni (US $ 200.4 bn).
Inflation mumwedzi yekutanga gumi neimwe ye2009 yakamira pa1.7 muzana-pasi zvakanyanya kubva makore apfuura. Mitengo yakaderera yedzimba nemutengo wekudya zvakakonzera kudzvinyirirwa mune hupfumi. Mu2008, inflation yakamira pa10.8 peresenti, semari yakakura kubva pamitengo yemafuta yakakwira yakawedzera hupfumi, ichigadzira kushomeka kwenzvimbo nemasevhisi. Panguva imwecheteyo, iyo isina kusimba dhora reUS nemitengo yepamusoro yezvikafu zvepasi rese zvakaita kuti zvinhu zvichengetedzwe zvakanyanya. Sangano reUA Central Bank's rakataurwa raive rekuchengeta miganho yemari yepasi pamazinga akaderera kuitira kuti rumutsiridziro mukukura kwehupfumi.
Maindasitiri uye Kukwezvana
Izvo zvikamu zvisiri-hydrocarbon zvakaita 63 muzana yeGDP mu2008, kunyangwe mitengo yakakwira yemafuta negesi, zvichizopa Dh 2.16 trillion (US $ 590 bn) kuhupfumi. Iyo UAE iri kutarisira kuderedza mupiro weyunivhesiti yehydrocarbons kune inosvika 20 muzana muzana mumakore gumi anotevera kusvika 15 makore nekusimudzira kukura kumwezve mune hupfumi. Kugadzira uye maindasitiri kunoramba kuchikosha kuve kwezvikamu zveHurumende zvekushandura shanduko yezvehupfumi, kuvaka pazvikamu zvakatobudirira sealuminium kunyungudutsa, ceramics uye mishonga yemishonga.
Mu2009, Abu Dhabi akavhura 2030 Economic Vision yavo, achiisa mepu yemigwagwa kuti iwedzere kuwanda kwehupfumi. Mubadala Development Company, chirongwa chekudyara chirongwa cheHur Dhabi Hurumende, iri kubhadhara basa rakakura mukuvandudza maindasitiri, kusanganisira mapurojekiti ari muchadenga (ndege dzenharembozha) kugadzira, mari yekutengesa, simba uye zororo. Abu Dhabi ari kutarisisa zvekare kune magetsi zvakare uye nekambani inopihwa ramangwana remagetsi Masdar chikamu chakakosha cheiyi zano. Masdar City, iyo inotsanangurwa nekambani seye "yekutanga nyika-isina-zero zero-tsvina guta uye dzimbahwe reInternational Renewable Energy Agency (IRENA) ', inozopedzisira yagara ma40,000 vagari uye 50,000 yemazuva ese inofamba kune dzimwe nzvimbo dze1500 green-energy fakitori. Masdar iri zvakare kudyara mari zvakanyanya mukukurumidza kukura kwetekinoroji yesoft-film solar energy panels, iyo inosanganisira kuvakwa kwegwenzi mu Abu Dhabi rinokwanisa kugadzira mapani akakwana gore rega rega kugadzira 130 megawatts
Dubai, ichirikugadzirisa mamwe emakambani ayo makuru-anotsigirwa nenyika, iri kuenderera mberi nekuvaka pamusoro pesimba rayo rakakura muindasitiri, kushanya nekutengesa. Sharjah ari kuenderera mberi nehurongwa hwekusimudzira maindasitiri, uye Ra's al-Khaimah Investment Authority (RAKIA) iri kuronga kutanga chirongwa chemazita eindasitiri anogadzirwa kuti vagadzire masango enzvimbo dzekugadzira. Fujairah iri kuvaka nzvimbo yakasununguka yemahara, yekutanga muUAE, iyo icharegedza makambani ane nyika dzese aite bhizimisi isingasviki pane iyo inobhadharwa nenzvimbo dzakasununguka dzemahara. Uye zvakare, iyo UAE Hurumende iri muzvikamu zvekupedzisira zvekugadzirira mutemo maindasitiri unotarisirwawo kukurudzira kugadzirwa kweindasitiri dzenyika.
Mapurojekiti makuru akati wandei akapedzwa mu2009, imwe inonakidza kwazvo kuve chitsuwa cheYas, nzvimbo yekuzorora mu Abu Dhabi uye kumusha kune Yas Marina wedunhu, iyo yakaitisa Fomula One Grand Prix munaNovember 2009. Zvirongwa zvikuru zvezvivakwa apo zvakapera, zvinosanganisira Dh28 bhiriyoni (US $ 7.62 bn) Dubai Metro, iyo isina kutyaira yekufambisa inotenderera mwoyo ye emirates; Sheikh Khalifa bhiriji, inobatanidza Abu Dhabi Island neSaadiyat uye Yas Island; uye iyo Palm Jumeriah Monorail. Icho chivakwa chakareba kwazvo pasi; iyo Burj Khalifa muDubai, yakavhurwa mukati mevhiki yekutanga ye2010.
Tourism ndiyo yakakosha chikamu chekusimudzira iyo ye UAE yose hupfumi. Abu Dhabi neDubai vese vakapfuura nemitambo yekudziridza, vakatarisa kumahotera emhando yepamusoro uye nzvimbo dzekuzorora. Kubva kuchitsuwa chekupisa cheSir Bani Yas kumadokero kwe Abu Dhabi, kuvanda kwegwenga kweQasr al-Sarab, muLiwa Oasis, uye Al Maha naBab al-Shams muDubai kunzvimbo dzakanaka dzemahombekombe eFujairah, Ra's al Khaimah uye Ajman, iyo UAE inopa zvivakwa zvepamusoro mune dzimwe nzvimbo dziri kure uye dzakanaka. Mapurojekiti eFlagship akadai seEmirates Palace Hotel, Burj al-Arab, Madinat Jumeirah, uye Bruj Khalifa vakabatsira kusimudzira chimiro chenyika, nemhedzisiro iyo Federation ine zvakawanda zvekupa kunyange zvinonyanya kudiwa zvevaenzi. Vanopfuura mamirioni e11.2 vashanyi vanotarisirwa mu2010, vachitungamira kubudirira kweiyo UAE yekuedza kusimudzira mari muindasitiri yevaeni.
Kunonoka Kuita Bhizinesi
Mu2009, iyo UAE yakakwira nzvimbo gumi nemana mugwaro re'Kuita Bhizinesi 'rakanyorwa neWorld Bank neInternational Fund Corporation. Chirevo chinozivikanwa pasi rese chinoongorora nyika pane kuti zviri nyore sei kumabhizinesi madiki uye epakati kuita bhizinesi. Iyo Federation yakakwira kusvika pamakumi matatu nenhatu chinzvimbo chepasi rese chekugadzirisa shanduko, zvimwe semhedzisiro yeHurumende danho rekudzima Dh150,00 (US $ 40,871) mari shoma inodiwa kune mamwe mabhizinesi ekutanga.
Zvimwe zvikonzero zviviri zvakakosha zveUSE yekukwira yaive yekugadzirisa maitiro akave nawo mukuwana mvumo yekuvaka uye kuvandudzwa kwesimba. kuDubai ports.
Kudyara mumisika yekukunze kwakabvira kare kwakabatana neiyo UAE yekuita dhiraivha yekugadzira mambure ekuchengetedza ezvizvarwa zvinotevera, kunyanya avo rimwe zuva vakatarisana netarisiro yekushomeka kwemagetsi emagetsi. Pakati pemimwe mizinda mikuru yekudyara nedzimwe nyika muEmirates ndeiyi: Abu Dhabi Investment Authority, Abu Dhabi Investment Council, Invest AD, Iyo Investment Corporation yeDubai, Dubai Holding, Dubai Holding Commerce Operation Group (inosanganisira Dubai Properties Group, Sama Dubai, Tatweer, Uye Duabi Holding Investment Group), uye Dubai World. Mukuwedzera, Mubadala, iyo Abu Dhabi National Energy Company (Taqa) uye iyo International Petroleum Kambani Yekudyara (IPIC) inotsvaga simba rekuvandudza kunze kwenyika
Nhanho dzakatorwa nemasangano emubatanidzwa mu2008 kudzosa chivimbo mumashandisirwo emari, kusanganisira iyo UAE Central Bank Dh50-bhiriyoni (US $ 13.6 bn) nzvimbo yekutsigira vakweretesi vemuno, uye iyo UAE Ministry of Finance Dh70 bhiriyoni (US $ 19 bn) mvura chirongwa chekutsigira, chakagadzirirwa kudzorera chikwereti, misika yemasheya masheya uye kupa kukurudzira muhupfumi. Mu2008, iyo Federal Government yakazivisawo kuti ichaita kusvika kuDH120 bhiriyoni (US $ 32.7 bn) inowanikwa kumabhangi munyika yose pasi pezvirongwa zvinoverengeka zvekukweretesa, uye kuvimbisa kuiswa uye kubvumirana kukweretesa kwemakore matatu.
MunaFebruary 2009, Abu Dhabi Dhipatimendi reZvemari akaisa Dh16 bhiriyoni (US $ 4.35 bn) mumashanu makuru emirate. Matanho aya akabatsira kusimbisa mashanga kumabhangi, kunyangwe mari yekubhengi yakawira mukota yekutanga, uye komiti yemari yekukurumidzira yakagadzwa nebazi rezvehupfumi kuti vafunge nezvezve zviitwa zvekutsigira vanokweretesa.
Mukati megore, mabhangi akashuma kuwedzera kwezvibodzwa uye akarasikirwa nemabhadharo pane ezvekutengesa uye evatengi zvikwereti. Nekuda kweizvozvo, iyo UAE mabhengi akanyorwa akatora nzira yekuchenjera nekutaura yakakwira-kupfuura-yakajairwa kupesana nekukwereta kwakaipa. Kubatsira mukuwedzera mari-cushioning mubhangi system, Central Bank yakaraira vakweretesi kuti kubva ku2010 vanofanirwa kutevedzera mutemo weBasel II pamusoro pekukwaniswa kwemari kumabhangi uye vatarise zvakanyanya kune njodzi-kudzora uye manejimendi. Hurumende yakazivisawo hurongwa hwekubatanidza maEmirates 'maviri makuru emamogeji, Amlak naTamweel. Izvi zvinofungidzirwa sekwakakosha mukupora mumusika wedzimba.
Iko kubhadharisa kwezvikwereti zvakawanikwa kubva pamusika nemakomisheni anopihwa nehurumende kwaive zvakare kutarisa basa mu2009. MunaFebruary 2009, Hurumende yeDubai yakatengesa Dh36.7 bhiriyoni (US $ 10 bn) muzvisungo kuCentral Bank kubatsira makambani mukutonga kwayo kubhadhara zvikwereti uye kubhadhara makondirakiti. Kutarisira kugoverwa kwemari iyi, iyo Dubai Financial Support Fund yakagadzwa muna Chikunguru 2009. Pa 25 Mbudzi 2009, Hurumende yeDubai yakazivisa kuti yakanga yakamhanyisa Dh18.4 mamirioni (US $ 5 bn) mukutsvaga mari kubva kuNational Bank Abu Dhabi neAl Hilal Bank, ese ari maviri anodzorwa neimwe yemari yakakura kwazvo yeU Abu Dhabi, iyo Abu Dhabi Investment Council. Dubai zvakare yakanyatsobudirira kuverengeka zvikwereti zvakakura mu2009, kusanganisira Dh12.47 bhiriyoni (US $ 3.4 bn) kudzokororazve kwemuchina wekuchinjanisa Borse Dubai chikwereti munaFebruary, uye kubhadhariswa kweDh3.67 bhiriyoni (US $ 1 bn) Dubai Civil Aviation Authority. Chisungo cheIslam muna Mbudzi.
Masheya akanyorwa paDubai Financial Market akapera gore kumusoro 10.2 peresenti, asi rakanga richiri kudarika 70 peresenti pasi kubva kune rakapfuura gore rakakwira. Nzvimbo dzekutengesa pa Abu Dhabi Securities Exchange dzakakwira ne 14.7 muzana mu2009, asi yakanga ichiri pasi 46 muzana kubva ku2008 yakakwira.
Oiri uye Gasi
Iine chidimbu cheayo nyika yevamwe vavakidzani vayo vekuGulf, iyo UAE zvisinei iyo yenzvimbo yechina inonyanya kuburitsa kunze mafuta emafuta akasviba, mushure Saudhi Arabhiya, Iran neIraq.
Iyo UAE ine yechipiri yepasirese yakaratidzirwa pasi kuchengetedza mafuta asina kujairika, uye yechinomwe-yakakurumbira yakachengetedzwa kuchengetedzwa kwegesi yakasikwa. Kunyangwe hazvo iripo chete yepfumbamwe yepasihombe inogadzira mafuta, ndiyo yegumi nemashanu mukurusa mafuta kunze, iRussia chete neSaudi Arabia inotumira kunze zvakanyanya. Kunotengesa zvinhu zvisina kuchena kunozviswededza pedyo neavo veIran, neKuwait, ayo ose ane matura makuru.
Mu2009, nekuda kwekuenzanisira kwemhando pamwe nekurekodha kugadzirwa kwezvinhu zvakavimbiswa neSangano rePetroleum Exporting Nyika (OPEC) kudzikamisa misika yemafuta, kubuda kweoEU kunowira kumamirioni mazana 2.3 pazuva (bpd) kubva pamamiriyoni 2.9 mu2008. Iyo gasi kugadzirwa yakamira pamwero unosvika 7 mabhiriyoni akaenzana emamita cubic pazuva. UAE iri kuenderera kumberi nehurongwa hwekuwedzera mafuta uye gasi kugadzirwa kwemagetsi, asi yakawedzera nguva yekuvandudzwa kwemafuta apa ichipa hukuru hwepamusoro kumaprojekiti egasi.
Pakutanga 2009 iyo Federation yakatsikiswa gasi inochengeterwa yakamira pa227.1 trillion cubic tsoka - yakakwana gasi kwemakore anopfuura 130 yekugovera pamazinga ekupedzisira ezvigadzirwa. Pakati pezvimwe zvinhu, izvi zvinoreva kuti kushaikwa kwegesi yeEmirates hakuzi nekuda kwekushayikwa kwemagasi, asi mukusakwanira kusimukira, kunyangwe akawanda magesi akachengetwa ari erudzi runodhura uye akaoma kugadzira. Abu Dhabi inonyanya kukosha mukuwedzera iyo UAE yehuwandu hwemafuta uye gasi kugadzirwa, nekuti ine inenge 94 muzana yezvegumi nemazana eiyo mafuta eColgegement kuchengetedza uye inopfuura 90 muzana yemagasi ayo. Iri kuwedzera huwandu hweoiri kugadzirwa kwemafuta uye gasi.
Zvichakadaro, kugadzirwa kwemafuta kuDubai, uko kwaimbove kweinenge hafu yeiyo emirate's GDP, yadonha zvakanyanya kubva kuchikamu che1991 chepamusoro pe410,000 bpd; ne2007 yakanga yadonhera ku80,000 bpd. Ichiri kuenderera kupombi gasi kubva kumhenderekedzo dzegungwa, Dubai zvakare inoshandisa mafuta akawanda kupfuura ayo inogadzira, uye inowedzera kutsamira kwezvinhu zvinogadzirwa kunze kuti iite mutsauko. Emirate yatotenga mazana emamirioni emamiriyoni cubic pazuva pazuva gasi kubva kuDolphin Energy, kambani yeAv Dhabi iyo inopinza gasi nepombi kubva kuQatar.
Makumi mana eAFA akasara mashanu emirates zvakare ane mashoma mashoma emafuta uye gasi kugadzirwa; Fujairah haibudisi mafuta kana gasi, kunyangwe chirongwa chekutsvaga mhiri kwemakungwa chiri kuitika. Nekudaro, chiteshi chechipiri chakakura kwazvo chepasi rose chiri pamhenderekedzo. Chiteshi cheFujairah, pagungwa reArabia, chinobata matani emamiriyoni emamiriyoni e1 pamwedzi wemafuta ekufambisa egungwa nezvimwe zvigadzirwa zvemafuta. Kuuya mu2008 kwekupinza gasi kuburikidza nepombi yeDolphin Energy kubva kuQatar kwaifambisa simba nekuvandudzwa kwemvura mune emirate uye yakasimudzira indasitiri yemuno.
IPIC, inova yeAg Dhabi Hurumende, iri kuvaka pombi yemafuta isina kuchena-kuendesa ku150,000 bpd yemafuta kubva kumahombekombe eA Abu Dhabi emahombekombe eiyo yekunyurura imwe nzvimbo kuFujairah. Iyo purojekiti inotarisira kuendesa nzira yeku kutumira kunze kwenyika yeA Abu Dhabi isina kuchena inodarika nzvimbo yegungwa yeGulf paStrait yeHormuz. Iyo yakarongerwa kupedzwa mu2010, neyekutanga tangi kutumira kubva kuFujairah inotarisirwa mukutanga 2011. IPIC iri zvakare kugadzira yekuchenesa mafuta uye zvichengeterwo pachiteshi cheFujairah.
Ichida kusvika 10 muzana yepasirese yepasi rose yemagetsi anocheneswa mafuta akasarudzika uye echishanu echisikigo gasi kuchengetedza, iyo UAE mubatsiri anodiwa uye anotarisira mutengesi mumisika yepasi rose simba. Ichinyanya kukosha kuhupfumi, kutengesa kunze kwemafuta ikozvino kunongoita chete 30 muzana yehuwandu hwechigadzirwa chakazara, nekuda kwemisangano yehurumende ine hunyanzvi yakagadzirirwa kukanganisa hupfumi hweAU.
Iyo UAE iri kudzinganisirawo ivhu repasi rose inovandudza simba uye simba rekushandisa. Mu2005 iyo UAE yakagonesa Kyoto Protocol kuUN Convention on Climate Change, ichiva imwe yenyika dzekutanga kugadzira mafuta kuita kudaro. Abu Dhabi akaisawo imwe yepasirose yekuvandudza nedzimwe nzira simba rekutanga.
Oiri uye Natural gesi
Imwe neimwe Emirate inodzora yayo pachavo kugadzira mafuta uye kusimudzira zviwanikwa. Abu Dhabi anobata inopfuura 90 muzana yemafuta eUA, kana yemadhiramu mabhiriyoni e92.2. Dubai ine yakafungidzirwa 4 mabhirioni mabhomba, ichiteverwa naSharjah neRas al-Khaimah ine 1.5 bhirioni uye 100 mamiririta emafuta, zvichiteerana.
Abu Dhabi ane nhoroondo yekugamuchira yakazvimirira masimendi mari mune yayo inokwira yeiri uye gasi rekutsvaga uye chikamu chekugadzira. Chokwadi, Abu Dhabi ndiye chete nhengo yeOPEC yekusatungamira kubatisisa kwevatorwa mari vekunze mukati menguva yemafashama yakatsvaira iyo indasitiri yemafuta nepasi mukati me 1970's, uye inoenderera mberi nekubatsirwa nehuwandu hwepamusoro hwezvikamu zvakazvimiririra. Mazuva ano makambani emafuta epasi rese kubva kuUnited States, Japan, France, Britain nedzimwe nyika achiri kuenderera mberi achibatanidza migodhi yemari pakati pe40 ne100 muzana mu Abu Dhabi yakawanda yemafuta.
Iyo UAE inoburitsa 60 muzana yemafuta ayo asina kuchena kuenda kuJapan, ichiita iyo iyo UAE yakawanda yemutengi. Kutengeswa kwegesi kunze kwenyika kuri kutomboenda kuJapan, mutengi mukuru wepasi rose gasi rakanyungudutswa, iyo UAE inopa inoda kusvika chikamu chimwe chete pazvisere zveJapan zvese zvinodiwa.
Nekuda kweiyo nzvimbo chaiyo inokanganisa mari yekufambisa, iyo UAE inoburitsa huwandu hwakawanda hwemafuta negesi kuUnited States. Zvakadaro, iyo UAE yakakosha yemafuta negesi kumusika wepasi rese uye chechipiri chete kuSaudi Arabia maererano nesipo yekugadzira oiri. Pamusoro pezvo, hurongwa hweUAE hwehasha hwekuwedzera hunyanzvi hwekugadzira huchabatsira zvakanyanya mukudzima ramangwana, zvinofambiswa nekwakawedzera mutengo wemafuta akasviba.
Iyo Dolphin Project, iyo inosimudzira gasi rechisikigo pombi kubva kuQatar kuenda ku UAE, ndiyo yekutanga mikuru mharadzano yesimba-simba pakati penyika dzeGulf. Iyo purojekiti ichasunungura gasi ra Abu Dhabi rekudzora mafuta asina kunaka uye kutengesa kunze kwenyika. Occidental Petroleum yeUnited States neTotal yeFrance imwe neimwe ine 24.5 muzana yakaenzana padanda muchirongwa, nepo Hurumende ye Abu Dhabi inobata yakasara 51 muzana. Chekutanga kutengeswa kwekunze kweQatari gasi rechisimba kwakatanga muzhizha re2007 uye kucharamba kuchienderera mukati memakore ese e30 ekuvandudza uye chibvumirano-chekugovana chibvumirano chakasainwa neHurumende yeQatar.
Kuchengetedza Mafuta Anotakura
Mukuedza kusimudzira kuchengetedzwa kwechero, hurumende dzeGulf dziri kudzidza kugadziridzwa kwepombi dzemafuta dzinogona kupfuura nedanho reHormuz. Inenge zvikamu zviviri muzvishanu zveoiri inotengeswa mafuta pari zvino inotumirwa naTangi kuburikidza neiyi 34-mile-wide ndima.
Kana ikavakwa, mapaipi anogona kufamba seyakafanana nemamirioni emamiriyoni e6.5 emafuta pazuva kana anenge 40 muzana yemari iripo pano neChipiri. Kuvakwa kwepombi yekutanga, diki yaizotakura mafuta kubva kuAFA's Habshan shamba yemunda kuenda kuEmirate yeFujairah, iri kunze kwedutu pamusoro peGulf of Oman.
UAE inoenderera mberi nekuwedzera zvakanyanya kugadzirwa kwayo kuti ipe misika yemagetsi yepasi rese. Kunyange dzimwe nyika dze OPEC nenyika zhinji dzisina OPEC dzakaona kugadzirwa kuderera mumakore mashanu apfuura, iyo UAE yakawedzera kugadzirwa kwayo kwemafuta akasviba neanenge 31 muzana. Hapana gore mukati menguva iyoyo ine avhareji gadzira gore pagore yakawira pasi pegore rapfuura.
Tichitendeukira kune ramangwana, kumusoro kwemaoiri uye gasi masangano muAFA inoenderera ichiona mapurojekiti matsva akanangana nekuwedzera simba renyika remafuta ekugadzira mafuta kusvika kumamirioni mazana 4 pazuva pazuva ne2020, izvo zvinogona kuwedzera kuwedzera kweanenge 40 muzana pamusoro pazvino zviyero zvekugadzira.
Magetsi: Kukurumidza Kuwedzera Zvinodiwa
Kukura kwehupfumi kwakawedzera muUSA zvakakonzera kuwedzera kukuru mukudikanwa kwemagetsi. Fungidziro dzazvino dzinoratidza kuti kudikanwa kwemudzimba kwesimba kuchawedzera kudarika kaviri ne2020. Nekushomeka kwezvakawanda uye nekukurumidza sei masimba esimba masimba, kunge gasi rechisikigo, anogona kuunzwa kumusika, pamwe nekushushikana nezvekushanduka kwemamiriro ekunze, Hurumende yeAU yakavimbisa zvirongwa zvakasiyana zvinovavarira kuziva imwe nzira yekugadzira iwo magetsi anodiwa kuti apise mafuta ayo hupfumi.
Iyo UAE iri kuongorora mukana wekugadzira chirongwa chine simba renyukireya. Iyo UAE Hurumende inonyatso kuziva nezvekunzwa kwakabatanidzwa mukuiswa kweiyo nyukireya zvinokonzeresa uye kunyangwe kuongororwa kuri nyore kwekugona. Nekudaro, iyo UAE Hurumende yakashanda kuita kuti zvinangwa zvayo zvine rugare uye zvisingaenzanisike kujekeseke, maererano nekuongororwa kwazvino chirongwa cheNyaradzo yerunyararo ine runyararo pamwe nekukwanisa kutungamira kwayo mune ramangwana. Hurumende yakaburitsa yakadzika mugwaro redzidziso kune veruzhinji, ichiratidzira kuti kusimudzira kungangoita kwesimba renyukireya kunogona kuteedzerwa sei zvakachengeteka, zvakachengeteka uye nerunyararo. Sechikamu chekuzvipira kwayo kuita pachena, kusawedzera, kuchengetedza uye kuchengetedza, iyo UAE yakatemera kuti haisi kuzoteedzera hupfumi hweuanium uye panzvimbo iyoyo vanovimba nemusika wepasi rose wetsiva yenyukireya. Munguva yese yekuita, iyo UAE yashanda pamwe neInternational Atomic Energy Agency (IAEA) pamwe nehumwe hurumende, kusanganisira United States.
Zvisinei nebasa rakakosha remafuta negesi kune iyo UAE, nyika yakaita zvibvumirano zvepasi rose mune rimwe simba. UAE iri kutora matanho ekuderedza kabhoni kuburikidza nematanho makuru muA Abu Dhabi neDubai.
Dubai iri kugadzira yakanakisa hurongwa hwemamiriro ekunze ayo achave nechokwadi kuti kukura uye kufambira mberi zvinowanikwa uchichengetedza nharaunda. Kudiwa-parutivi-manejimendi yemagetsi ichaita basa, sekuwedzera kwekufambisa kwevanhu.
Iyo mukuru yeEUEmirate, Abu Dhabi, akapa mari inodarika mabhiriyoni emadhora 15 mumapurogiramu esimba anowanikwazve. Iyo Masdar Initiative inosimbisa kuzvipira kwamapatya kune zvakasikwa epasi pamwe nekusiyana kwehupfumi hweAU. Iyo Masdar Initiative inotarisa mukuvandudza uye kushambadzira kwematekinoroji mune simba zvakare, simba simba, kabhodhi manejimendi uye monetization, kushandiswa kwemvura uye desalination.
Vabati veOrigation vanosanganisira mamwe emakambani makuru emagetsi epasirese uye nzvimbo dzakakwirira: BP, Shell, Occidental Petroleum, Kuchera Ongororo neKugadzira, General Electric, Mitsubishi, Mitsui, Roll Royce, Imperial College London, MIT uye WWF. Iyo ine zvina zvakakosha zvinhu: Iyo yekuvandudza nzvimbo yekutsigira kuratidzira, kushambadzira uye kugamuchira kweyakagadziriswa simba tekinoroji. Iyo Masdar Institute of Science neTekinoroji nezvirongwa zvevakapedza kudzidza musimba rekuvandudza simba nekusimudzira, iri muMasdar City, guta rekutanga-pasi-kabhidhi, rakasarudzika, risina dhorobha. Kambani yekuvandudza yakatarisa mukushambadzira kwekudzikiswa kwemagetsi, uye yakachena Yenharidziro Yekuvandudza Mechanism sezvakapihwa neKyoto Protocol. Yakakosha Yehupfumi Zone yekutora masangano anoisa mari muivandudza simba tekinoroji uye zvigadzirwa.
Iyo UAE's Energy Policy
Iyo UAE yagara kwenguva refu iri mushambadzi wakakosha wesimba uye ikozvino iri kuramba ichiwedzera kukosha mutengi wesimba zvakare. Mukuedza kwayo kukurumidzira kuvandudzwa kwemamwe magetsi emagetsi uye mukuedza kwayo kubatsira mukuvandudza nekushandisa mamwe masimba esimba, iyo UAE inotarisira kuenderera netsika yayo refu yekutarisira masimba masimba.
Kuchengetedza uye kuchengetedza nharaunda yeAUE ndechimwe chezvinhu zvakaomarara mabasa ayo zvakatarisana nazvo kusvika parizvino. Kupisa kwakanyanya uye kunaya kwemvura kwakadzika kunoita kuti zviome mamiriro ekunze, zvichidikanwa kuti zvinyatsoshandiswa kuti mhuka nezvirimwa zvirarame. Kunyangwe zvidiki shanduko dzemamiriro ekunze dzinogona kukanganisa zvakanyanya iyo UAE yezvinhu zvipenyu. Pamusoro pezvo, nzvimbo yakadzika-pamhenderekedzo yegungwa inoreva kuti kunyangwe zvishoma kukwira kwemakungwa kunogona kuve nehunhu hwakakomba munharaunda yemahombekombe, munogara huwandu hwevagari vemunyika vanogara uye kwakawanda kurongwa kuitika kuri kuitika. Chokwadi, zvidzidzo zvesainzi zviri kuona zviratidzo zvekuti huwandu hwegungwa muGulf hunogona kunge huri kuwedzera.
Huwandu hwevanhu hwakura kubva pakatenderedza 180,000 mu1968 kusvika pamamirioni mashanu nhasi. Nekuda kweizvozvo, huwandu hwevhu huri kushandiswa kwekugara, hwezvokutengeserana uye hwemaindasitiri kushandiswa hwawedzera zvakanyanya. Kudzokorora uye kusimudzira kwakadzosera UAE pamhenderekedzo mune pfupi kwazvo nguva yakatarwa. Kuwedzerwa kwezvivakwa zveRusununguko nenzira yenhandare dzendege, madoko nemigwagwa mikuru zvakawedzera kufutisa pane yaimbova nzvimbo yekugara, nepo kuchera matombo ekuvakira kwakave nekukanganisa kukuru mumakomo mazhinji eHajar.
Zvisinei nekusimba kweshanduko, Hurumende yakazvipira kuchengetedza zvakatipoteredza uye kusvika pachiyero chakaringana pakati pekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza nezvinodiwa zvebudiriro.
Iyo federal Ministry yezvemamiriro ekunze uye yeMvura, pamwe nemasangano emuno - ayo anonyanya kushanda iAnharaunda Agency Abu Dhabi, anotarisira inosvika chikamu chimwe muzvishanu muzana yeAE's nzvimbo yepasi - vakaramba vachishanda pazvirongwa zviripo zvekutsvaga kwesainzi uye kugadzirira. uye kuita kweanogara-mirau uye nhungamiro.
Kurudziro yezvidzidzo yakagadzirwa nerubatsiro rwemasangano asiri ehurumende akadai seEmirates Wildlife Society (EWS) kusimudzira pachena ruzhinji nezve kukosha kwekuchengetedza nharaunda uye kuderedza kushandiswa kwesimba nemvura.
Yasat Marine Yakachengetedzwa Nzvimbo, pamwe neyakaipisisa dugongs, yakakwiridzwa kuti ibatanidze zvimwe zviwi zvekare, uye ikozvino inofukidza nzvimbo inenge ye3000 square km. EWS uye Fujairah Municipality vakazivisawo Wadi Wurrayah nzvimbo inochengetedzwa. Imba kune iyo iri panjodzi yeArabia tahr, ino yeAEe yekutanga gomo kuchengetedza.
Kuchengetedza mvura nyowani uye zviwanikwa zvegungwa zvakakwirirawo pane iyo UAE ajenda, nepo kusvibiswa kwemhepo kuchikonzerwa nekutemwa nematombo uye kugadzira simende kwakonzera kuvharwa kwedzimwe nzvimbo muRa al-Khaimah neFujairah.
Uye zvakare, iyo Federation yakashanda kwemakore mazhinji nedzimwe nyika pahwaro chibvumirano chekudzivirira zvimwe zvipuka, senge houbara bustard, inobereka pakati peAsia asi ichitamira kuArabian Gulf. UAE parizvino yakasarudzwa seDzimbahwe sechibvumirano chitsva chenyika dzepasi rose nezvekuchengetedza nekudzivirira kweshiri dzinofamba dzinofamba nedzeshiri dzinodya nyama mukati Europe, Africa neAsia.
Media uye Tsika
Iyo UAE moyo wekushambadza weMiddle East vezvenhau chikamu, vachishanda sedunhu hub kune vekunze vemakambani enhau uye sevhu rakaorera rekusimudzira vekuno venhau maindasitiri. Iyi sekisheni iri kukurumidza kutarisirwa neNational Media Council, inoona nezvekupa marezinesi enhau, kusimbisa mitemo yenhau, uye kumhanyisa bazi rezvekunze neEmirates News Agency, WAM.
Mamwe emakurukota makuru enhau munyika ndeye Abu Dhabi Media Company, iyo inoshanda uye ichishandisa nhepfenyuro terevhizheni, nhepfenyuro nhepfenyuro, zvinyorwa zvinoverengeka (pepanhau reAl Ittihad, Pepanhau reNational, magazini yeZahrat Al Khaleej uye magazini yaMajid. ) uye mamwe akawanda ane chekuita nevezvenhau ane chekuita nevezvenhau, kusanganisira mafirimu-ekuvandudza kambani Imagenation, United Kudhinda Press uye Kurarama.
Nzvimbo dzakasununguka dzave chishandiso mukufambiswa kwenhau, CNN yakagadzira hunyanzvi yenhau mu Abu Dhabi's new renofour54 media zone iyo yakakwezva vamwe vazhinji vezvenhau vezvenhau. Dubai Media City ikozvino yave neinopfuura 1200 yakanyoreswa bhizinesi se CNN, iyo BBC, MBC uye CNBC. Iyi ndeimwe yemasumbu enzvimbo dzezvenhau dzakasununguka dzinoitiswa naTecom, kusanganisira Dubai Internet City, Dubai Studio City pamwe neInternational Media Production Zone. Aya matunhu akafanirwa nekusimudzirwa kwenzvimbo diki dzenhau dzakasununguka dzakadai seFujairah Creative City neRAK Media City.
Kugadzirwa kwemafirimu, ose ari pamhando yepasi rese uye nekumudzimba, anokurudzirwa, uye anotsigirwa nemasangano akati wandei, anosanganisira Dubai Studio City, maviri akadziva54, Abu Dhabi Chiremera chetsika uye Heritage (ADACH), Denderedzwa uye Abu Dhabi Firimu Commission.
Mabhuku, kusanganisira kushandurwa kwemabasa makuru muArabic, uye inokurudzirwa nemasangano akaita seKitab neKalima. Fairs huru dzevanyori vebhuku dzakaitirwa muUAE dzinosanganisira iyo yakareba-yakatangwa Sharjah International Book Fair uye Abu Dhabi International Book Fair, nepo mubairo mukuru wekunyora izita ndiyo Sheikh Zared Book Award, iyo yakaenda kuna Pedro Martinez Montavez mu2009.
Dubai Press Club inoronga, pakati pezvimwe zvinhu, iyo Arab Media Forum, uye inobata maArabia Zvekuita Zvemitambo, zvino iri mugore rayo sere uye iri nemapoka gumi nemaviri akasiyana.
Nhaka netsika ndizvo zvakakosha pakuzivikanwa kwenyika, uye iyo UAE iri kuita nhamburiko dzekuchengetedza tsika dzayo. Panguva imwecheteyo, iyo Federation inovandudzwa patsika, ine simbiso yekudyara mune zviwanikwa zvepasi rose zvigadzirwa uye kuumba mabhiriji pakati peEast ne West.
Iyo Federal Ministry yeTsika, Vechidiki uye Nharaunda Development inoshanda muminda iyi, ichigadzira mikana yekuti vechidiki Emirates vatore chikamu mune zvetsika, huchenjeri, zvemitambo uye zvevaraidzo mabasa, ukuwo vachikurudzira vagari vakuru kuti vatore chikamu savaridzi, vachipa ruzivo rwetsika yavo mudiki chizvarwa.
Kubatsira kusimudzira kukoshesa mimhanzi, ADACH inoronga zviitiko zvakawanda zvemimhanzi, kusanganisira iyo Dh Dhabi Classics, iyo yakabata Middle East dhizaina reNew York Philharmonic mu2009. WOMAD yemumhanzi wepasi rese mutambo wakaitwawo mu Abu Dhabi. Uye zvakare, nhepfenyuro yemakonzati yakanzi 'Dubia Sound City' yakaita mukurumbira mu2009. Panyaya yehunyanzvi hwekuona, mukuvamba 2009 iyo 'Emirati Expression' inoratidzira ine makumi masere nemanomwe maartist emuno, kubva kune veteran painters kusvika kuchizvarwa chitsva chevaapikicha, vanogadzira graphic, vhidhiyo uye yekuisa maartist. Zvichakadaro, iyo Sharjah Biennial, Art Dubai, Art Fair uye kumwe kuratidzwa kwakati kwakaitwa pamwe nekubatana nevamwe vakaita seGuggenheim Foundation, iyo Louvre, New York University Abu Dhabi, uye Paris-Sorbone University Abu Dhabi. Art Contemporary inomirirwawo zvakanaka kumakamirari akazvitsaurira muEmirates yose.
Pakati pezvinhu zvikuru zvetsika dzepasi rose zvakagadziriswa neBazi reSiko, Vechidiki uye Nharaunda Development mukati megore kwaive kuronga kweAU yekutanga tambo paVenice Biennale. Mamwe mabasa mhiri kwemakungwa akasanganisira vhiki-refu 'UAE Ctsika Mazuva' mutambo muBerlin uye mutambo weEmirati -German muHambamberi, uko kumwe chirongwa cheUngano, chirongwa che 'Dialogue of Cultures' chakatangwa zvakare.
Padanho rakakura retsika, miziyamu yepasi rose seGuggenheim Abu Dhabi, Louvre Abu Dhabi, uye Sheikh Zared National Museum iri kukura. Zvichakadaro, iyo yakatove yakanyatsosimbiswa yeSharjah Museum mizhinji inotarisira mamyuziyamu gumi nemanomwe uye masangano masisitimi, kusanganisira inoshamisa yeumamyuziyamu mutsva weIslam mukubudirira.
Chido chekuvandudza mwero we mupenyu revanhu varo uye kugara zvakanaka kwenharaunda kwaendesa ruzhinji hurongwa - kwete maererano nekusimudzira hupfumi, asi zvakare mune izvo hwemagariro. Mumakore mashoma mapfupi, shanduko huru dzemagariro dzakaitika munharaunda yaimbova yedzinza. chiitiko chakatanhamara, kunyangwe izvi zvisingafambiki zvakanaka, iyo UAE inharaunda yakachengetedzeka uye yakagadzikana, yakavhurika uye inofambira mberi, yakakurumbira nekushivirira kwayo, vanhu uye tsitsi.
Kuedza kweHurumende kubatsira nharaunda mukuchinja kwemaitiro kwakasimbiswa nehurongwa, hwakagadzwa mu2009, kuti mharidzo paminamato yeChishanu mumisangano yeFedhi yose inofanira kuisa pfungwa pazvinhu zvekunamata uye zvechinamato kwete zvechitendero. Misoro inosanganisira nzira yekurera vana, kodzero dzevakadzi uye kukosha kwebasa, huwandu hwenyika uye kushivirira.
Hurumende yemagariro tsika yakashanda, sezviri kuratidzwa nenzvimbo muUN Human Development Index (HDI), inotarisa pamusoro peGDP kune tsanangudzo yakajeka yekugara zvakanaka. Pakati pe1980 uye 2007, UAE HDI yakakwira ne0.72 muzana pagore, uye nhasi 0.903, yakakwira kubva ku0.743. Izvi zvinoisa iyo Federation makumi matatu neshanu kunze kwenyika dze182 kune iyo data iripo - kuchengetedza nzvimbo yeAFA mune rondedzero yenyika dzine huwandu hwepamusoro-hwevanhu hwekuvandudza.
Kunyange zvakadaro, kukura kweFedhi kukurumidza kuwedzera vanhu kwakaunza matambudziko ehuwandu. Pakupera kwe2009, huwandu hweAUE hunofungidzirwa kuva 50.6 mamirioni, kumusoro kubva pamamirioni 4.76 mu2008, kana kukura kwegore rose kweanenge 6.3 muzana. huwandu hwekukura kwevagari veko vakafungidzirwa pa3.4 muzana mu2009. Nekudaro, kunyangwe ichi kuwedzera nekukurumidza, iyo UAE yakachengetedza chinzvimbo chayo sedzimwe nyika dzakapfuma maererano neiyo GDP pamari yemari, yaingofungidzirwa kuDH195,000 (US $ 53,133.5) pakutanga kwe2009; yechipiri chete kuQatar munyika yeArabhu.
Mhuri yakagara iri dombo rekona ye UAE nzanga. Nhasi, nyaya dzemagariro nedzine hupfumi dzinogona kunetsa kunyangwe vakazvipira kwazvo kumhuri, uye Hurumende inopa rutsigiro kune avo vanoshaiwa, kunyanya vakwegura, vakaremara uye vanorambana. Mukuwedzera, ruzhinji rwemasangano ehurumende uye asiri ehurumende anobatsira muzvirongwa zvehutano hwemagariro. Iyo UAE Red Crescent Authority, muPasicular, ndiyo huru hurusa sangano rekupa rubatsiro munyika, inopa zvakakwana zvemagariro, hupfumi, hutano uye zvirongwa zvekudzidzisa. Rubatsiro runoshanda rwunopihwawo nenzvimbo dzekudyidzana dzinofambiswa neGeneral Women Union.
Hurumende iri kupa zvakare kukosha kune dzimba dzemunharaunda uye inoda kuvaka nharaunda dzine nzvimbo dzinodiwa. Pamwe 17,000 villas itsva yeEmiratis ichavakwa mu Abu Dhabi mumakore mashanu anotevera, uye 50,000 pamusoro pemakumi maviri anotevera. Dzimba zhinji nemapamba zvichapihwa kune vagari mahara. Sangano reSak Z Zezvekuvaka Dzimba, rakatsigirwa neHurumende kuti ripe dzimba dzekudyara uye zvikwereti zveAUE Columbines, inoenderera mberi nekuwedzera mabasa ayo muEmirates yose.
Iyo UAE inoremekedza kuvimbika kwemunhu wese anogara muFederal. Kuzvipira kwayo kuvimbisa kuenzana uye kuringana kwevanhu munharaunda dzese dziri muBumbiro. Bumbiro rinotsanangurawo kusununguka nekodzero dzevagari vese, kurambidza kushungurudzwa, kusungwa, nekuremerwa, uye kuremekedza rusununguko, kusanganisira rusununguko rwekutaura nekutora, runyararo.
musangano uye kusonganirana, uye tsika yezvitendero zvechitendero. Hurumende yakazvipira chose kusimudzira, nenzira inovaka, misimboti yeChisarudzo Chemunhu Yese Chekodzero dzevanhu uye yakatsunga kuvandudza rekodhi reimba nekuuya kwayo nemitemo nemaitiro kusvika pazuva. Izvi zvinoenderana neAUE yetsika tsika uye dzechitendero manhedzisiro, ayo anoratidzira ruramisiro, zvakaenzana uye kushivirira.
Panzvimbo dzepasi rose, iyo Federation inosayina Chibvumirano pamusoro peKubvisa Kusarura Vanopesana neVakadzi, Chibvumirano pamusoro pekodzero dzeMwana, International Labor Organisation Convention pamusoro peMaminimum Age, uye Chibvumirano cheKodzero dzeVakaremara.
Padanho renyika, iyo Federation inosayina Chibvumirano pamusoro peKubvisa Kusarura Vanopesana neVakadzi, Chibvumirano pamusoro pekodzero dzeMwana, International Labour Organisation Convention yeMinimum Age, uye Chibvumirano cheKodzero dzeVakaremara.
Padanho renyika, hurongwa hweHurumende hwunotarisana nekuona kusimudzira nyika dzese nekusimudzira zvirongwa zvekusimudzira vakadzi uye nekuvandudza dzidzo yepamusoro-soro uye hutano hwehutano, pamwe nekusimudzira kwenhengo dzenharaunda dzine zvakakosha uye mamwe mapoka anotambudzika kupinda maitiro ekuvandudza.
Nezve nyaya dzevashandi zvine chekuita, iyo UAE ine chinangwa chekutarisira uye kutonga nharaunda yekushanda inoenderana nemitemo yenyika dzepasiripo uye zvakanakisa nzira dzevashandi dzepasi rose. Kuedza kwakawanda kwakaitwa kuve nechokwadi chekuchengetedzwa kwevashandi, kuvimbisa kubhadharwa kwemubairo nenguva uye kuvandudza mararamiro uye mamiriro ekushanda, pamwe nekuve nechokwadi chekumanikidzwa kwakasimba kwemitemo kuitira kuderedza kutyora.
Kufanana kwevakadzi nevarume kwave kuri pahurongwa hweHurumende kubvira pakavambwa Shirikisho, uye vakadzi muAU vagara vachizivikanwa sevakarovedzana zvakaenzana budiriro yenyika. Hurumende inoramba ichitevera chirongwa chekupa simba vanhukadzi mune zvetsika, zvemagariro pamwe nehupfumi. Nekuda kweizvozvo, UAE inowanikwa munzvimbo makumi matatu nesere mu2009 UN Human Development Report Gender-inoenderana neInternational Index - Mufananidzo unoisa pakati penyika dzepamusoro-soro nzvimbo.
Vanhukadzi veAU nhasi vanopinda mumasangano ese ehurumende, kusanganisira makuru, ematare uye ematare, uye vanofarira mabasa akasiyana siyana. Muchokwadi, vakadzi veAU zvino vanogadzira 66 muzana yevashandi vekambani-yeruzhinji vashandi, 30 muzana avo vari muzvigaro zvepamusoro.
Vese vagari veAUE vanonakidzwa nekusununguka kuwana kwese kwepuraimari, sekondari uye yepamusoro dzidzo. Mumakore achangopfuura, chikamu chedzidzo chakatora kukosha kukuru: shanduko yaro nekuvandudza inomiririra nhanho yakakosha mukufambiswa mberi kweCommission, uye kuedza kukuru kuri kuitwa kudare redzimhosva kudzokorora makurukota uye kuve nechokwadi chekuti zvikoro nemakoreji zvinoongororwa nemazvo. uye chinorumbidzwa.
Dzidzo Inokosha iri kugamuchira yakakwenenzverwa kutariswa, inotariswa mu2009 pakubatanidzwa kwevadzidzi venyika kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzinodiwa muzvikoro zveveruzhinji. Seti nyowani yemitemo yezvikoro zveruzhinji neyakavanzika inovavarira kuona kuti zvikoro zvinotevedzera mutemo uyu, uye zvirango zvinowanikwa mukusatambira kwevana vane zvinodiwa zvakanyanya.
Chikamu chepamusoro-dzidzo muUAE chiri kuitawo kukurumidza kukurumidza uye shanduko. Iyo nyowani yunivhesiti yeZared University iri kuvakwa pa75 mahekita muCastle inosimuka. Iyo UAE University muAl Ain zvakare ine zvirongwa zvekuwedzera kwakakura, uye kambasi nyowani iri kuvakwa. Mamwe madanho akakosha echitatu-danho rinosanganisira iwo Akakwira maUkoreji eTekinoroji, iyo Etihad yekudzidziswa nzvimbo, Emirates Aviation College yeAerospace uye Zvidzidzo zveExpress, Emirates Institute yeBhengi neMari, uye Etisalat's makoji uye kuyunivhesiti.
Mamwe mayunivhesiti ekunze, kubva kuParis Sorbonne kuenda kuMicrosoft State University, anonyatsomiririrwa muUAE. Iyo Abu Dhabi kambasi yeNew York University inovhura mumatsutso e2010. Mamwe masangano akakosha anopa makosi akasarudzika anosanganisira INSEAD, iyo New York film Academy, Dubai Chikoro cheHurumende, Iyo Petroli Institute, uye Masdar Institute of Science neTekinoroji.
Hutano hwehutano mu UAE ndeyepasi rose, uye kurapwa kwepamberi nepashure kuri parutivi nenyika dzakasimukira kwazvo. Semhedzisiro, tarisiro yehupenyu pakuzvarwa kwe 78.5 makore asvika pamatanho akafanana neavo muEurope neNorth America.
Kuunzwa kweinishuwarenzi yehutano inishuwarenzi mu Abu Dhabi yevakadzingwa uye vavanovimba navo mutyairi mukuru mukushandurwa kwehutano hwehutano. Pamusoro pezvo, chirongwa chemubatanidzwa chine chinangwa chekuona kuti vese veEmirati uye vanobva kunze kwenyika vachaputirwa neinishuwarenzi yehutano pasi pechirongwa chakabatanidzwa.
Zvivakwa zvehutano zvehutano zvatova zvewakakwira muAU, uye, kunyangwe mamiriro ekunze ezvemari, hutano hwehutano hwakaramba hwakatarisana nekudyara, nehuwandu hwehurumende uye hwepamapurojekiti ari kuitwa mu2009.
Mushonga wekudzivirira uye hutano hweveruzhinji vanoonekwa sevakakomba kune hutano hwekugara kweUAE hushoma huwandu hwevanhu. Nyanzvi kuwedzera kwemararamiro akawanda ezvirwere mumakore anouya. Kunyangwe hazvo zvipingaidzo zvetsika zviri kudzikwa zvishoma nezvishoma, zvichiri kukanganisa nyaya dzakakura senge kenza. Kumanikidzwa mammilimita evakadzi vane makore makumi mana nemakumi matanhatu uye kurambidzwa kuputa fodya munzvimbo dzeruzhinji mienzaniso yekuedza kuri kuitwa kusimudzira hutano hwevanhu mune izvi. Iyo UAE zvakare ine huwandu hwakawanda hwechirwere cheshuga uye chirwere chemoyo, uye iri kuburitsa hurongwa hwekuita nenyaya idzi. Yekutanga hutano hutano ndechimwe chishandiso chakakosha muhurongwa hwehutano hweveruzhinji, uye kutsikisa iyo UAE iri kushanda nesimba kuvandudza.
Vatungamiriri vehutano hweveruzhinji mu2009 vakapikiswa nekutyisidzira kwe swine flu (H1N1) denda. Nekudaro, iwo matatu makuru ehutano hutano - Ministry of Health, iyo Health Authority - Abu Dhabi neDubai Health Authority - yakachinja nekukurumidza uye nekudzivirira pakurapa kwekudzivirira, dambudziko rekutonga uye kudzora kwezvirwere uye chirongwa chakabudirira chakaiswa kugadzirisa mamiriro .
Iyo UAE ine yakakwana, yakatsigirwa nehurumende hutano hwekushandira pamwe nekukurumidza inosimudzira bazi rezvehutano iro rinopa huwandu hwakanyanya hwehutano hwehutano kunehuwandu. Munzvimbo dzakawanda dzeAUE, hutano hwekutarisirwa hutano huri kuita shanduko yakakosha.
Hazhinji dzezvirwere zvinotapukira senge marariya, gomarara neporaomyelitis yaive yamboparara muUAE yakabviswa, nepo hutano hwekuzvara uye hwekuzvara mwana huri parutivi nenyika dzakasimukira zvakanyanya: huwandu hwekuzvarwa patsva (neonate) yakaderedzwa ku5.54 pa 1000 uye kufa kwevacheche kune 7.7 pa 1000. Kufa kwevakadzi matanho akadonha ku0.01 ye100,000 yega yega.
Semhedzisiro yeiyi yepamusoro yepamusoro yekutarisira pamatanho ese ehutano hutano system, tarisiro yehupenyu pakuzvarwa muUAE, pamakore 78.3, asvika pamatanho akafanana neavo muEuropean neNorth America. Parizvino, hutano hwehutano muUAE, hwakawanda, hwakapihwa mari neHurumende. Sezvimwe zvimwe zvikamu, kusimbisa uku kuri kubuda uye kudyidzana kwevoruzhinji-vega voga kubatirana kuri kuwedzera zvakanyanya kukosha.
Veruzhinji mutemo unotarisa mukuvandudza masangano uye epamutemo masystem akavakirwa pakubata kwakanaka, kusimudzira iwo akazvimirira neveuzhinji chikamu chehutano hutano hwekugona. Pamusoro pezvo, ruzhinji rwemabatiro ehurongwa rwunotara zvinokoshesa zvekuvandudzwa kwemabasa ehutano mukati mekambani.
Hutano Hutano Shanduko mu Abu Dhabi
Kuchengetedzwa kwehutano kuendeswa ku Abu Dhabi kuri kuitika shanduko yakakosha iyo inokanganisa huwandu hwese hwevatori vechikamu: varwere (vagari nevadzingwa), varapi uye avo vane basa rekuronga, kuvimbisa mhando yemasevhisi uye kupa mari yehutano hutano. Zvinangwa zvakakosha zveChiremera muHur Dhabi ndezve:
Kuvandudza kunaka kwekutarisira, nguva dzose kuve kwekufungisisa kukuru, kukurudzirwa kuburikidza nekushandiswa kwemaitiro akasimba ebasa uye tarisiro dzekuita kune vese.
Wedzera mukana wekuwana masevhisi, uchipa vagari vese mukana wakaringana wekutarisirwa vane simba rekusarudza hutano nekubatsira kusimudzira kuburikidza nemahofisi emahara- musika.
Kutama kubva kuruzhinji kuenda kune vega vanozvimirira vakachengeteka uye zvakaringana kuitira kuti vanozvimiririra, panzvimbo pehurumende, vashandire hutano hwehutano zvinodiwa, nebasa rehurumende rinorambidzwa kukudziridza nekusimbisa hutano hutsva, hwepasi rose hwehutano hwehutano.
Shandisa itsva yekubhadhara mari yemaitiro kuburikidza neye nyowani system yekumanikidzwa inishuwarenzi yehutano.
Inomanikidzwa inishuwarenzi yevashandi vese, kusanganisira vekumba, vanopihwa mari nevanozvitsigira. Iyo inomanikidzwa yeinishuwarenzi yehutano chirongwa chevashandi vevako vega vega, sezvinoitwa mu Abu Dhabi, ichauya nekushanda munyika yese mu2008. Zviratidzo zveiyo nyowani system inosanganisira yakajeka uye pachena kudzorera maitiro ekubhadhara, mukana unowanikwa kune vese vagari uye mari yakavimbika yehutano hwehutano mu Abu Dhabi.
Mari inopa rubatsiro ichaenderera mberi ichishanda kune vanodzingwa kunze kwenyika uye zvakare inovhara zvakanyanya kurwara zvakanyanya senge cancer, dialysis, polytrauma nekuremara.
Sangano idzva rakabatana reinishuwarenzi muhutano muDubai kune vekunze uye vasiri verudzi rakarongwawo zvakare uye zvinotarisirwa kuti chirongwa ichi chigozotepfenyurwa nenyika yose.
United Arab Emirates ndeimwe yenzvimbo dziri kukurumidza kukurumidza kupfuura dzekushanya uye nzvimbo dzebhizinesi. Kugamuchirwa kwevaArab kwechienzi uye kudziya kwakanaka kwechando kunopedzeredzwa nezvivakwa zvakaipisisa uye zvinhu zvepasi rese.
Iyo UAE zvakare yave yenzvimbo yepasi rose yekuitirwa makongiresi, matunhu uye epasi rese zviitiko nemitambo mikuru yepasirose yakaita seDubai World Cup yekumhanya-bhiza, Abu Dhabi Fomula One Grand Prix, iyo Dubai Desert Classic Gorufu Mamiriro, iyo FIFA Club World Cup, yepasi rose mafirimu mafirimu muDubai pamwe ne Abu Dhabi, uye pamwe ne White House, Global Einemabhizimusi Summit. Iyo UAE yakahwina mubairo wekutora 2020 World Expo.
Iyo United Kingdom inonyanya kushambadza pamhepo online mumiririri, expedia.co.uk, yakasarudza Abu Dhabi seimwe yenzvimbo yepamusoro 10 yekushanyira nzvimbo mu2008. Dubai International Airport yakahwina mubairo weiyo Middle East inotungamira nendege mu2012 World Travel Awards.
Pane zvakawanda zvekuita muUSA kupfuura Dubai ne Abu Dhabi. Kutanga kugadzikiswa panguva yeBronze Age, Sharjah ndiro guta retsika emirates. Nzvimbo yeGugu reSharjah Guta inosanganisira Maritime Museum, yeIslam Museum uye mamuseum ezvetsika dzekare uye dzazvino zveArabhu art, pakati pevamwe vazhinji.
Ajman inokwezva vashanyi vedzimwe nyika nemahombekombe akanaka, sezvinoita Fujairah iyo inopawo svumbunuro nekukambaira uye kuenda kunzvimbo dzeMusandam Peninsula, inozivikanwa nekusasarudzika kwemawere ayo, matombo emawere uye mabwe ekorari.
Ras Al Khaima, pamuganho neOman, ingangozivikanwa zvakanyanya pakati pevashanyi vemunharaunda yekufamba kweyeMakomo eHajjar Makomo.
Visa / Passport Yekuenda kuAFA
1) Ruzhinji ruzivo
zvose MaIndia ne muIndiya mapasipoti anoshanda kwemwedzi inopfuura matanhatu anogona kupinda muAFA.
2) Visa pane Diplomatic uye Official Passports
Amburenzi inoburitsa mavhiza paDiplomatic uye Official Passports chete. Zvinyorwa zvinodiwa pane izvi ndeizvi:
Verbale kubva kuIndia Ministry of External Affairs (nenyaya yeVashandi veHurumende yeIndia) kana kubva kune iyo Diplomatic Mission (kana maPolitics kana maHurumende anoshanda muDhiplomatic Mission) .Do rekusvitswa kweChinyorwa verbale rinofanira kunge riri mukati memwedzi mumwe zuva rekubuda kwaro.
Fomu reKunyorera rakanyorwa muReta Letters
Haikwanisi vhiza Fomu Rokukumbira harizovaraidzwe.
Fomu rekunyoresa Visa rinofanirwa kusainwa nemunyoreri panzvimbo yakapihwa siginecha yake.
Iyo Nzvimbo dzeSponsor mu UAE chinhu chinodiwa.
Govt. Vakuru vanofanirwa kutaura Particulars dzeSponsor seMumiriri wavo kana Embassy muAAE, nechinangwa cheKupinda uye Kero Yakazara.
Colored Passport Copy (Iri Peji Peji, Yega Dhata & Zuva rekupera) uye Coverpage (ruvara).
Imwe pasipoti yemhando yakakura foto (To be pasted).
3) Vashanyi Visa Yekufamba kuenda kuAAE
Mumiriri weUAE haubudise maviza pamapasipoti akajairika.
Vavhidhi vhiza yeIndian National, yakabata yakajairika pasipoti, yakarongedzwa nemushandi muUAE. Inogona zvakare kuwanikwa pakuchengetera hotera muUAE kana kuburikidza neEmirates Airlines Office kana kuti Air Arabia Hofisi kana kuburikidza neA Travel Agent kuIndia.
4) Kubviswa kweVisa
Mumiriri weUAE haakanzure visa.
Kuti vhiza yako ibvumidzwe, iwe unofanirwa kuonana newako anotsigira muAE akange akurongedza vhiza. Anokutsigira ane iye chete mvumo yekubvisa yako yapfuura vhiza. Pasina kuwana iyo yapfuura vhiza yakamiswa, haugone kuwana vhiza yeAU itsva uye haugone kuenda kuAEE.
Maitiro ekurasikirwa kwePasipoti, ane vhiza yeAU Residence vhiza.
Panyaya yekurasikirwa kwepasipoti yekuIndia ine vhiza yeAU Residence yakajeka, magwaro anotevera anoda kuendeswa kuEmbassy Counter:
Yechokwadi yakazadzwa Yakarasikirwa yePasipoti fomu (muTypeded Capital Letters), nemaviri manhamba ekukumbanira (pazasi fomu).
Chekare uye nyowani pasipoti yemavara.
UAE Residence Visa's kopi yemavara.
Tsamba yakabva kumushandirapamwe muAU, ichiti uyo ari kunyorera akasiya UAE nemvumo yake.
Ikopi yeiyo Yekutanga Yemapurisa Ripoti kana MOTI muChirungu, inopupurirwa neInternational External Affairs Ministry (Zuva-re-kubuda reMOT rinofanira kunge risati rasvika-zuva rekubuda kwepasipoti itsva.
ARABIC RUSHANDURO rweMapurisa runyorwa rwepasipoti yakarasika nechisimbiso cheArabic Translator.
Imwe Passport size Colored Colour.
Mutero weDh 300 / -.
Kana izvi zvinyorwa zvizoendeswa kuUA Embassy Counter, anenge achinyorera achaziviswa kana pemiti yekupinda yagadzirira.
Attestation / Legalization yeGwaro
1) Attestation / Legalization yeZvinyorwa
Vanhu vanogona kutumira magwaro avo eOWN, kana zvinyorwa zveBLOOD RELATIVES yavo, pakuratidza humbowo hweChitupa uye chiratidzo chehukama. Zvinyorwa zveshamwari zvinogona kuendeswa PAMWE kuburikidza nevapi nevapi vanobvumidzwa mumiririri.
Zvinyorwa Zvekutengeserana zvinogona kuendeswa zvakananga neImvumo Kambani - Vashandi. Tsamba yesimba pane iyo Kambani Letterhead (ine zita reMubatiri & Seal yeiyo Kambani) uye iyo Kodhi ID inodikanwa mune iyi kesi.
2) Matanho eChisimba / Pamutemo Zvinyorwa
Zvinyorwa zvese zvinoda kuratidzwa kwekutanga neCentular Chikamu cheGurukota rezvekunze Zvinhu zveIndia, uyezve neCentular Section, Vasant Kunj, New Delhi. Ndokumbira utarise kuti magwaro edzidziso anofanirwa kuverengerwa nebazi rezvedzidzo yenyika inoshushikana pamberi pechibvumirano che 'Zvekunze'. Yekupupurira kuConsular Chikamu, UAE Dirham 156.06 ndiyo mubhadharo wegwaro uye iyo nguva iri 9: 00 AM kusvika 2: 00 PM, Muvhuro kusvika China, uye 9: 00 AM kusvika 12: 00 PM neChishanu. Gwaro rinogona kutorwa pazuva rimwe chete, pakati pe3: 00 uye 4: 00 PM, Muvhuro kusvika China, uye 2: 30 PM kusvika 3: 30 PM neChishanu. Kune chero mibvunzo, tapota nyorera e-mail kwatiri ku: consular@uaeembassy-newdelhi.com
Zvimwe zvitupa zvakaita seMuchato, Kuzvarwa, Zvakaitika, Zvikumbiro, maODI emapasipoti akaraswa, Zvinyorwa zvekutengesa, nezvimwe zvinoda kuratidzwa nebazi rezvekunze Zvinhu zveIndia chete. Mamwe maitiro anoramba akafanana. Mari yekubhadhara magwaro ekushambadzira inoenderana nenyaya yacho uye mubhadharo weiyo invoice unosiyana nemutengo weInvoice. Ndokumbirawo ubvunze iyo UAE Embassy's Consular Chikamu mune chero mibvunzo.
3) Mari dzeKuratidzwa Kwezvinyorwa
Mari dzinowanikwa muAU Dirham
Gwaro redzidzo (madiploma, madhigirii, zvitupa zvechikoro)
Chekare Degree Chitupa
Setifiketi reNational Trade
Madrasa madhigiti uye zvitupa
MOTO yekurasikirwa kwepasipoti
Simba Gweta (Changu)
Chitupa Kuongorora Chitupa
Seti Nyoresa Setifiketi
Chitupa Chemunhu Chitupa
Kwepamutemo Heirship Chitupa
Kopi yeDhivha Yekutyaira, Passport, nezvimwe.
Mari inobhadharirwa maInvoice kukosha pamwe neInvoice Value
4) Zvekushambadzira Zvinyorwa
Factorization pakati pevanhu, apo ichivhura kambani
Factorization nekutora chigadzirwa, kana chatengeswa mukati
Factorization nekutora chigadzirwa, painotengeswa kunze
Simba regweta kuvhura bhizinesi mukati medunhu.
Kugadziridzwa kwekugovera capital.
Nhanganyaya yemudiwa mutsva.
Franchise - kutanga kambani
Vhura bazi idzva rekambani yekune imwe nyika.
Vhura mhando nyowani yekambani yekune dzimwe nyika kunze kweiyo
Bhizinesi rezinesi (uko makopi anogoverwa kune dzinopfuura nyika imwe kuvhura bazi munzvimbo dzese).
Kuzadzikiswa kwemapurojekiti anga ari
chapera kupedzwa kwese kwese,
mukati menyika kana kunze kwenyika.
Kambani bhajeti yemari
Corporate yemari bhajeti regore rega regore remari
Yevashanyi License Kunyoresa
Komiti dzekutengesa (Yakavanzika / Ruzhinji)
Kubviswa kweLayisensi, Kugadzwa kweBazi meneja,
Kuvhura Brnach, Kutungamira kweQuotas
Cert. yenhengo dzeMakambani eCommerce.
Amaminitsi eMusangano weBhodi yeVatungamiriri.
Memorandumiro yeMubatanidzwa weKambani.
Kopi yeanenge chero e-pre-Certified agents akanyorwa pamusoro.
Mari dzinoshanduka chero nguva pasina akambotarisa
5) Inobhadhara maInvoice
Chitupa Chekuita Kwakanaka
1) Kuwana iyo Fingerprints inopupurirwa kubva kuAE Consulate
Kuti awane chitupa chekubvisa mapurisa kubva kune chero Emirate yeUAE, mukwikwidzi anofanira kuwana zvigunwe zvake zvakasimbiswa neingi inki nemapurisa emunharaunda yeguta rake, ipapo neve Ministry of Home of his state uye ipapo ne Ministry of Kunze. Zveku India. Kero yehofisi yavo yeDelhi iri Consular Chikamu, Patiala House, Tilak Marg, padyo neIndia Gate. Mamwe mahofisi eSevhisi yeZvekunze ari muChennai, Guwahati, Hyderabad neKolkata. Iye anenge achivhotera anogona zvakare akananga kuFingerprint Cell muPatiala House kuti zvigunwe zvake zviitwe. Anoratidzwa zvigunwe zvemanwe zvinofanirwa kuiswa muAU Embassy (angave ari oga, kana kuburikidza nehama dzake dzeropa, kana kuburikidza chero nevapi vedu vatenderi) kubva ku9: 00 am kusvika 12: 00 pm, Muvhuro kusvika Chishanu. Rs.3,750 / - ndiye mubhadharo weti sereti IN CASH, uye gwaro raizodzoserwa kumashure pazuva rimwe chete, pakati pe3: 00 pm uye 4: 00 pm.
2) Kutumira iyo Inoratidzwa Fingerprints ku UAE
Kana uchinge wagamuchira zvigunwe zveminwe kubva kuAgent, iwe unofanirwa kuzvitumira kune iyo yakakodzera kambani muUAE. Ndokumbirawo ubatanidze zvinhu zvinotevera.
Iyo fomu yeminwe yakanyoreswa zviri pamutemo neAU Consulate
Kopi yemvumo yako yekugara yekutenderwa muUAE
Ikopi yepasipoti yako yapfuura
Makara maviri mapareji-saizi mafoto
Chero mari inodiwa (zvinoenderana nesimba)
Tumira bhegi rako kuSevhisi inonetsekana Yezvemukati mepasi pazasi. Usati watumira zvinyorwa, ndapota fonera iyo UAE Hofisi kuti uwane ruzivo pamusoro pemari inodiwa, uye kuve nechokwadi kuti urikuvatumira kunzvimbo yakakodzera.
General Dhipatimendi Rekupara mhosva
Mvumo uye Zvitupa Chikamu
Tele: 971-4-2013484 / 2013564
Dhipatimendi reMapurisa - Abu Dhabi
Tinokurudzira kutumira zvinyorwa kune shamwari iri kuAFA, kuitira kuti shamwari yako itore chitupa kubva kuDhipatimendi reMapurisa pane iwe. Izvi zvichaderedza zvakanyanya nguva yekugadzirisa kana ichienzaniswa nekutumira magwaro zvakananga kuDhipatimendi reMapurisa.
Rondedzero Yakavharirwa Mishonga mune UAE
Pazasi pane runyorwa rweMishonga inorambidzwa neMishonga, yakanyoreswa nebazi rezvehutano muUAE uye inosimbiswa neAU Ministry of Interior and International Narcotic Controlled Board (INCB).
Mamwezve mabvunzo anogona kuendeswa kuAU Ministry of Health's Dhipatimendi Rinozvidzora muDhith Dhabi, PO Box 848, Fax: + 971 2 6313 742.
Iyi inotevera rondedzero inoratidza iyo serial nhamba, kutengeserana zita, generic zita uye fomu yemishonga.
1, 123 COLD Mahwendefa, Codeine phosphate 8mg, Acetaminophen 325mg, Cafeine 30mg, Carbinoxamine maleate 3.06mg, Phenylephrine 5mg, Mahwendefa
2, ABILIFY 10mg, Aripiprazole 10mg, Mahwendefa
3, ABILIFY 15mg, Aripiprazole 15mg, Mahwendefa
4, ABILIFY 20mg, Aripiprazole 20mg, Mahwendefa
5, ABILIFY 30mg, Aripiprazole 30mg, Mahwendefa
6, ACTIFED potire linctus, Codeine Phosphate10mg, Triprolidine1.25mg, Pseudoephedrine 30mg / 5ml, Linctus
7, DECITED DM, Dextromethorphan 10mg, Triprolidine1.25mg, Pseudoephedrine 30mg / 5ml, Linctus
8, ACTIVELLE, Estradiol & Norethisterone, Mahwendefa
9, ADOL inotonhora, Dextromethorphan HBr 15mg, Pseudoephedrine HCL 30mg, Paracetamol 325mg, Caplets
11, ADOL poda, Codeine phosphate 10mg, Paracetamol 150mg, Cafeine 50mg, Salicylamide 200mg, Mahwendefa
12, AKINETON 2mg, Biperiden HCL 2mg, Mahwendefa
13, AKINETON 5mg, Biperiden Lactate 5mg / ml, In injisi
14, AKINETON RETARD 4mg, Biperiden HCL 4mg, Mahwendefa
15, ALGAPHAN, Dextropropoxyphene HCL 25mg Paracetamol 300mg, Mahwendefa
17, ANAFRANIL 10, Clomipramine HCL 10 mg, Mahwendefa
18, ANAFRANIL 25, Clomipramine HCL 25 mg, Mahwendefa
19, ANAFRANIL SR 75, Clomipramine HCL 75 mg, Mahwendefa
20, ANDRIOL 40mg, Testosterone undecanoate 40mg, Makapu
23, ARTANE 2, Benzhexol HCL 2 mg, Mahwendefa
24, ARTANE 5, Benzhexol HCL 5mg, Mahwendefa
25, ARTHROTEC 50, Misoprostol 0.2mg Diclofenac sodium 50mg, Mahwendefa
26, ATIVAN 1, Lorazepam 1mg, Mahwendefa
28, AURORIX 100, Moclobemide 100mg, Mahwendefa
29, AURORIX 150, Moclobemide 150mg, Mahwendefa
30, AURORIX 300, Meclobemide 300 mg, Mahwendefa
32, BARNETIL 400, Sultopride 400mg, Mahwendefa
33, BENZTRONE 5mg / ml, Oestradiol Benzoate 5mg / ml, Jekiseni
35, BRONCHOLAR, Dextromethorphan HBr 7.5mg Guaifenesin 50mg, Ephedrine HCl 7.5mg, Chlorpheniramine maleate 1.25mg / 5ml, Musanganiswa
36, BRONCHOLAR forte, Dextromethorphan HBr 15mg Ephedrine HCL 7.5mg, Guaifenesin 50mg, Chlorpheniramine maleate 1.25mg / 5ml, Musanganiswa
38, BUCCASTEM 3mg, Prochlorperazine Maleate 3mg, Mahwendefa
39, BUSPAR 10, Buspirone HCL 10mg, Mahwendefa
40, BUSPAR 30 mg, Buspirone HCl 30 mg, Mahwendefa eDhiriose
41, BUSPAR 5, Buspirone HCL 5 mg, Mahwendefa
42, CAMCOLITE 250, Lithium Carbonate 250mg, Mahwendefa
43, CAMCOLITE 400, Lithium Carbonate 400mg, Mahwendefa
44, CANTOR 50, Minaprine 50mg, Mahwendefa
47, CIPRALEX 10mg, Escitalopram (se Escitlopram oxalate) 10mg / piritsi, Mahwendefa
48, Cipralex 10mg, Escitalopram, Hwendefa
49, CIPRALEX 15mg, Escitalopram (se Escitlopram oxalate) 15mg / piritsi, Mahwendefa
50, Cipralex 15mg, Escitalopram, Hwendefa
51, CIPRALEX 20mg, Escitalopram (se Escitlopram oxalate) 20mg / piritsi, Mahwendefa
52, Cipralex 20mg, Escitalopram, Hwendefa
53, CIPRALEX 5mg, Escitalopram (se Escitlopram oxalate) 5mg / piritsi, Mahwendefa
54, CIPRAM 20, Citalopram 20 mg, Mahwendefa
55, CLIMEN, Micronised Estradiol Valerate (pink) 2mg / 1tab, Micronised Estradiol Valerate (chena) 2mg / 1tab, Micronised Cyproterone Acetate (Pink) 1mg / 1 tab.
56, CLOPIXOL 2, Zuclopenhtixol diHCL 2mg, Mahwendefa
57, CLOPIXOL 25, Zuclopenhtixol diHCL 25mg, Mahwendefa
58, CLOPIXOL -Acuphase 100mg, Zuclopenhtixol acetate 100mg / 2ml, In injion
59, CLOPIXOL Depot 200, Zuclopenhtixol decanoate 200mg / ml, Jekiseni
60, CLOPIXOL Depot 500, Zuclopenhtixol acetate 500mg / ml, Jekiseni
61, CLOPIXOL10, Zuclopenhtixol diHCL 10mg, Mahwendefa
66, CODIPRONT, Codeine 30mg, Phenyltoloxamine 10mg, Makapu
69, CODIPRONT Cum Exp., Codeine 30mg, Phenyltoloxamine 10mg, Guaifenesin 100mg, Mahwendefa
70, CODIS, Aspirin 500 mg, Codeine Phosphate 8 mg, Mahwendefa
72, CYTOTEC, Misoprostol 200mcg, Mahwendefa
73, DEANXIT, Flupentixol diHCL 0.5mg, Melitracene HCL 10mg, Mahwendefa
74, DECA DURABOLIN 25mg / ml, Nandrolone Decanoate 25mg / ml, Jekiseni
75, DECA DURABOLIN 50mg / ml, Nandrolone Decanoate 50mg / ml, Jekiseni
76, DEHYDROBENZ-PERIDOL, Droperidol 2.5mg / ml, In injisi
77, DEMETRIN 10, Prazepam 10mg, Mahwendefa
80, DHC CONTINUS, Dihydrocodeine tartrate 60mg, Mahwendefa
83, DIAPAM 10, Diazepam 10mg, Mahwendefa
84, DIAPAM 2, Diazepam 2mg, Mahwendefa
85, DIAPAM 5, Diazepam 5mg, Mahwendefa
86, DIARSED, diphenoxylate HCL 2.5mg, Atropine sulfate 0.025mg, Mahwendefa
87, DIAXINE, Diphenoxylate HCl 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, Mahwendefa
88, DIAZEPAM 2, Diazepam 2mg, Mahwendefa
89, DIAZEPAM 5, Diazepam 5mg, Mahwendefa
90, DICTON inodzokera 30, Codeine 11mg, Carbinoxamine 1.5mg / 5ml, Syrup
93, DISTALGESIC, Propoxyphene HCL 32.5mg Paracetamol 325mg, Mahwendefa
94, DOGMATIL 100, Sulpiride 100 mg / 2ml, In injion
96, DOGMATIL 50, Sulpiride 50 mg, Makapu
97, DOGMATIL Forte, Sulpiride 200 mg, Mahwendefa
98, DORMICUM 15, Midazolam 15mg, Mahwendefa
101, DORMICUM 7.5mg, Midazolam 7.5mg, Mahwendefa
102, DorsILON, Mephenoxalone 200mg, Paracetamol 450mg, Mahwendefa
103, EDRONAX 4mg, Reboxetine 4mg, Mahwendefa
104, EFEXOR 37.5, Venlafaxine 37.5mg, Mahwendefa
105, EFEXOR 75, Venlafaxine 75mg, Mahwendefa
112, ESTROFEM, Oestradiol 2mg, Mahwendefa
113, ESTROFEM FORTE, Oestradiol 4mg, Mahwendefa
114, FAVERIN 100, Fluvoxamine maleate 100mg, Mahwendefa
115, FAVERIN 50, Fluvoxamine maleate 50mg, Mahwendefa
116, FEMOSTON 2 / 10, Dydrogesterone (Y) 10mg, Estradiol (O) 2.0mg, Estradiol (Y) 2.0mg, Mahwendefa
117, FLEXIBAN, Cyclobenzaprine HCL 10mg / tab., Mahwendefa
118, FLUANXOL 0.25, Flupenthixol 0.25mg, Mahwendefa
119, FLUANXOL 0.5, Flupenthixol 0.5mg, Mahwendefa
120, FLUANXOL 1, Flupenthixol 1mg, Mahwendefa
121, FLUANXOL 3, Flupenthixol 3mg, Mahwendefa
122, FLUANXOL Depot, Flupenthixol 20mg / ml, In injion
123, FLUANXOL Depot, Flupentixol decanoate 100mg / ml, In injion
124, FLUOXONE DIVULE, Fluoxetine 22.4mg, Makapu
126, FLUTIN 20mg, Fluoxetine Hydrochloride 20mg, Makapu
127, FLUXETYL 20mg, Fluoxetine (saF. Hydrochloride) 20mg / kapisule, Capsules
128, FRISIUM 10, Clobazam 10 mg, Mahwendefa
129, FRISIUM 20, Clobazam 20 mg, Mahwendefa
131, GENOTROPIN 16 IU (5.3mg), Somatropin 16IU / 1Cartridge, Powder yeIn injion
132, GENOTROPIN 36 IU (5.3mg), Somatropin 36IU / 1Cartridge, Powder yeIn injion
133, HALDOL 0.5, Haloperidol 0.5mg, Mahwendefa
134, HALDOL 2mg / ml, Haloperidol 2mg / ml, Madonhwe
135, HALDOL 5, Haloperidol 5mg, Mahwendefa
136, HALDOL 5mg / ml, Haloperidol 5mg / ml, In injion
137, HALDOL Decanoas, Haloperidol 50mg / ml, In injion
138, HALDOL Decanoas, Haloperidol 100mg / ml, In injion
139, HEMINEVRIN, Chlormethiazole 300mg, Miglyol (812) 125mg, Makapu
140, IMUKIN 100mcg / 0.5ml, Recombinant Yevanhu Interferon-gamma 6000000 IU / ml, Injection *
141, INSIDON 50, Opipramol 50mg, Mahwendefa
142, INTARD, Diphenoxylate HCl 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, Mahwendefa
143, INTRAVAL, Thiopentone Sodium 0.5g / 1vial, In injion
148, KEMADRIN 5mg, Procyclidine HCL 5mg, Mahwendefa
151, KLIOGEST, Oestradiol 2mg, Norethisterone 1mg, Mahwendefa
152, LAGAFLEX, Carisoprodol 300 mg, Paracetamol 250mg, Mahwendefa
154, LARGACTIL 10, Chlorpromazine HCL 10mg, Mahwendefa
155, LARGACTIL 100, Chlorpromazine HCL 100mg, Mahwendefa
156, LARGACTIL 25, Chlorpromazine HCL 25mg, Mahwendefa
158, LARGACTIL 50, Chlorpromazine HCL 50mg, Mahwendefa
161, LEXOTANIL 1.5, Bromazepam 1.5 mg, Mahwendefa
162, LEXOTANIL 3, Bromazepam 3 mg, Mahwendefa
163, LEXOTANIL 6, Bromazepam 6 mg, Mahwendefa
164, LIMBITROL, Amitriptyline 12.5 mg, Chlordiazepoxide 5 mg, Makapu
165, LIORESAL 10, Baclofen 10 mg, Mahwendefa
166, LIORESAL 25, Baclofen 25 mg, Mahwendefa
167, LOMOTIL, Diphenoxylate HCl 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, Mahwendefa
168, LUDIOMIL 10, Maprotiline HCL 10mg, Mahwendefa
169, LUDIOMIL 25, Maprotiline HCL 25mg, Mahwendefa
170, LUDIOMIL 50, Maprotiline HCL 50mg, Mahwendefa
171, LUDIOMIL 75, Maprotiline HCL 75mg, Mahwendefa
173, MellERIL 10, Thioridazine HCL 10mg, Mahwendefa
174, MellERIL 100, Thioridazine HCL 100mg, Mahwendefa
175, MellERIL 25, Thioridazine HCL 25mg, Mahwendefa
176, MellERIL 50, Thioridazine HCL 50mg, Mahwendefa
177, MENOGON 75IU, Menotrophin HMG 75IU / 1Ampoule, In injion
178, MUSCADOL, Orphenadrine citrate 35mg, Paracetamol 450mg, Mahwendefa
179, MYOGESIC, Orphenadrine 35mg, Paracetamol 450mg, Mahwendefa
180, NEOTIGASON 10, Acitretin 10 mg, Makapu
181, NEOTIGASON 25, Acitretin 25 mg, Makapu
182, NOBRIUM 10, Medazepam 10mg, Makapu
183, NOBRIUM 5, Medazepam 5mg, Makapu
184, NOCTRAN 10, Clorazepate dipotassium 10mg, Acepromazine maleate 1.016mg, Aceprometazine maleate 10.16mg, Mahwendefa
185, NORACOD, Codeine 10mg, Paracetamol 500mg, Mahwendefa
186, NORCURON 10mg, Vecuronium Bromide 10mg / ampoule, Powder yejekiseni
187, NORCURON 4mg, Vecuronium Bromide 4.0mg / ampoule, Powder yejekiseni
188, NORDITROPIN 12IU, Somatropine 12 IU, In injion
189, NORDITROPIN 4IU, Somatropine 4 IU, In injion
190, NORDITROPIN Peni rakaiswa 12, Somatropine 12 IU, Injection S / C
191, NORDITROPIN Peni rakaiswa 24, Somatropine 24 IU, Injection S / C
5mg / 1.5 ml, Somatropin, Inj mune Prefgcwal yakazara peni
10mg / 1.5 ml, Somatropin, Inj. mune yakachengetedzwa peni
15mg / 1.5 ml, Somatropin, Inj. mune yakachengetedzwa peni
198, NORFLEX, Orphenadrine citrate 30mg / ml, In injion
199, NORFLEX 100, Orphenadrine citrate 100mg, Mahwendefa
200, NORGESIC, Orphenadrine citrate 35mg Paracetamol 450mg, Mahwendefa
201, NUBAIN 10mg / ml, Nalbuphine HCL 10mg / ml, In injisi
202, NUBAIN 20mg / ml, Nalbuphine HCL 20mg / ml, In injisi
203, Nuvaring, Etonogestrel & Ethinylestradiol, Mhete yeVaginal
204, ORAP, Pimozide 1mg, Mahwendefa
205, ORAP Forte, Pimozide 4mg, Mahwendefa
206, OXETINE, Fluoxetine Hydrochloride 20mg, Mahwendefa
208, PARACODOL, Codeine phosphate 8mg, Paracetamol 500mg, Mahwendefa
211, PHYSEPTONE 5, Methadone HCL 5mg, Mahwendefa
212, PREPULSID, Cisapride 1mg / ml, Kusimudzirwa
214, PREPULSID 10mg, Cisapride 10mg, Mahwendefa
215, PREPULSID 5mg, Cisapride 5mg, Mahwendefa
216, PRIMOTESTONE depot 100mg, Testosterone Enanthate 110mg, Testosterone Propionate 25mg, = Testosterone 100mg / ml, In injion
217, PRIMOTESTONE depot 250mg, Testosterone enanthate 250mg / 1ml, In injion
218, PROGYLUTON, Estradiol Valerate 2mg / 11white tab., Estradiol Valerate 2mg & Norgestrol 0.5mg / 10 orange tab.
220, PROKINATE 10mg, Cisapride 10mg, Mahwendefa
221, PROKINATE 5mg, Cisapride 5mg, Mahwendefa
222, PROLIXIN 25mg / ml, Fluphenazine decanoate 25mg / ml, Jekiseni
223, PROPESS, Prostaglandin E2 10mg / pessary, Vaginal Pessaries
225, PROTHIADEN 75, Dothiepin HCl 75mg, Mahwendefa
226, PROVIRON, Mesterolone 25mg, Mahwendefa
227, PROZAC, Fluoxetine 20mg, Mahwendefa
228, PROZAC, Fluoxetine 20mg / 5ml, Liquid
229, PROZAC Vhiki nevhiki 90mg, Fluoxetine (saF. Hydrochloride) 90mg / kapisule, Capsules
230, REDUCTIL 10mg, Sibutramine Hydrochloride Monohydarte 10mg, Makapu
231, REDUCTIL 15mg, Sibutramine Hydrochloride Monohydarte 15mg, Makapu
232, REMERON 15 mg, Mirtazapine 15mg, Mahwendefa
233, REMERON 30 mg, Mirtazapine 30mg, Mahwendefa
234, REMERON 45 mg, Mirtazapine 45mg, Mahwendefa
235, Remeron Sol Tab 30mg, Mirtazapine, Mahwendefa
236, REVACOD, Codeine Phosphate 10mg, Paracetamol 500mg / 1 tab., Mahwendefa
239, RISPERDAL 1, Risperidone 1mg, Mahwendefa
240, RISPERDAL 1mg / ml, Risperidone 1mg / 1ml, Oral Solution
241, RISPERDAL 2, Risperidone 2mg, Mahwendefa
242, RISPERDAL 3, Risperidone 3mg, Mahwendefa
243, RISPERDAL 4, Risperidone 4mg, Mahwendefa
247, RITALIN 10, Methylphenidate HCL 10mg, Mahwendefa
248, RITALIN SR 20mg, Methylphenidate HCL 20mg / 1tab., Mahwendefa
249, RIVOTRIL 0.25%, Clonazepam 0.25%, Madonhwe
250, RIVOTRIL 0.5, Clonazepam 0.5 mg, Mahwendefa
251, RIVOTRIL 1mg / ml, Clonazepam 1mg / ml, In injisi
252, RIVOTRIL 2, Clonazepam 2mg, Mahwendefa
253, ROACCUTANE 10, Isotretinoin 10mg, Makapu
254, ROACCUTANE 2.5, Isotretinoin 2.5mg, Makapu
255, ROACCUTANE 20, Isotretinoin 20mg, Makapu
256, ROACCUTANE 5, Isotretinoin 5mg, Makapu
257, ROBAXIN, Methocarbamol 100mg / ml, In injion
258, ROBAXIN 500, Methocarbamol 500mg, Mahwendefa
259, ROBAXISAL, Methocarbamol 400mg, Aspirin 325mg, Mahwendefa
261, ROMILAR 1.5%, Dextromethorphan 15mg / ml, Madonhwe
263, ROMILAR EXPECTORANT, Dextromethorphan 3.06mg, Ammonium chloride 18mg, Panthenol 11mg / 1ml, Syrup
264, SAIZEN 4 IU, Somatropine 4 IU, In injion
265, SALIPAX, Fluoxetine 20mg, Makapu
266, SANDOSTATIN 0.05, Octreotide 0.05mg / ml, In injion
267, SANDOSTATIN 0.1, Octreotide 0.1mg / ml, In injion
268, SANDOSTATIN 0.2, Octreotide 0.2mg / ml, In injion
269, SANDOSTATIN 0.5, Octreotide 0.5mg / ml, In injion
270, SAROTEN Yodzokera 25, Amitriptyline HCL 25 mg, Capsules
271, SAROTEN Yodzokera 50, Amitriptyline HCL 50 mg, Capsules
273, SEDOFAN-P, Dextromethorphan HBr 15mg, Mahwendefa
274, SERENACE 0.5, Haloperidol 0.5mg, Mahwendefa
275, SERENACE 1.5, Haloperidol 1.5mg, Mahwendefa
276, SERENACE 10, Haloperidol 10mg, Mahwendefa
277, SERENACE 5, Haloperidol 5mg, Mahwendefa
278, SEROQUEL 100 mg, Quetiapine 100 mg, Mahwendefa
279, SEROQUEL 200 mg, Quetiapine 200 mg, Mahwendefa
280, SEROQUEL 25 mg, Quetiapine 25 mg, Mahwendefa
281, SEROQUEL Patient Starter Pack, Quetiapine 100 mg / tab. (Mahwendefa e2), Quetiapine 25 mg / tab. (Mahwendefa e6), Mahwendefa
282, SEROXAT 20, Paroxetine 20mg, Mahwendefa
283, SERZONE 100mg, Nefazodone HCL 100mg, Mahwendefa
284, SERZONE 150mg, Nefazodone HCL 150mg, Mahwendefa
285, SERZONE 200mg, Nefazodone HCL 200mg, Mahwendefa
286, SERZONE 250mg, Nefazodone HCL 250mg, Mahwendefa
287, SERZONE 50mg, Nefazodone HCL 50mg, Mahwendefa
288, SIRDALUD 2, Tizanidine 2mg, Mahwendefa
289, SIRDALUD 4, Tizanidine 4mg, Mahwendefa
290, SOMADRYL potasi, Carisoprodol 200mg Paracetamol 160mg, Caffeine 32mg, Mahwendefa
293, SOSEGON 50mg, Pentazocine HCL 56.4mg, Mahwendefa
294, ST.JOSEPH kukosora, Dextromethorphan HBr 0.1179% w / w, Syrup
298, STELAZINE 1, Trifluoperazine 1mg, Mahwendefa
299, STELAZINE 10, Trifluoperazine 10mg, Makapu
302, STELAZINE 5, Trifluoperazine 5mg, Mahwendefa
304, STEMETIL, Prochlorperazine maleate 25mg, Mahwendefa
305, STEMETIL, Prochlorperazine maleate 5mg, Mahwendefa
306, STEMETIL, Prochlorperazine maleate12.5mg / ml, In injion
307, STEMETIL, Prochlorperazine maleate 25mg / 2ml, In injion
308, STERANDRYL RETARD 250mg, Testosterone Hexahydrobenzoate 125mg, Trans-hexahydroterephtalate ye n-butyl uye Testosterone 125mg / ampoule, Injection
310, STESOLID, Diazepam 2mg, Mahwendefa
311, STESOLID, Diazepam 5mg, Mahwendefa
312, STESOLID, Diazepam 5mg / ml, In injion
313, STESOLID, Diazepam 5mg / 2.5ml, Rectal solution
314, STESOLID, Diazepam 10mg / 2.5ml, Rectal solution
315, STILNOX 10mg, Zolpidem Tartrate 10mg / 1 tab., Mahwendefa
316, STIVANE 300, Pyrisuccideanol dimaleate 300mg, Makapu
317, SUBUTEX 2mg, Buprenorphine HCL 2mg / 1tab., Mahwendefa
318, SUBUTEX 8mg, Buprenorphine HCL 8mg / 1tab., Mahwendefa
319, SURMONTIL 25, Trimipramine maleate 35mg, Mahwendefa
320, SURMONTIL 50, Trimipramine maleate 69.75mg, Makapu
324, TEMGESIC 0.3mg / ml, Buprenorphine HCL 0.3 mg / ml, Jekiseni
326, TEMGESIC Sublingual, Buprenorphine HCL 0.2 mg, Mahwendefa
327, TIAPRIDAL 100, Tiapride 100mg, Mahwendefa
328, TIAPRIDAL 100mg / 2ml, Tiapride 100mg / 2ml, In injion
329, TICLID, Ticlopidine 250mg, Mahwendefa
331, TOFRANIL 10, Imipramine 10mg, Mahwendefa
332, TOFRANIL 25, Imipramine 25mg, Mahwendefa
334, TRAMAL 100mg / 2ml, Tramadol 100mg / 2ml,
335, TRAMAL 100mg / ml, Tramadol 100mg / ml, Madonhwe
336, TRAMAL 50mg, Tramadol 50mg, Makapu
337, TRAMAL 50mg / ml, Tramadol 50mg / ml, In injion
338, TRAMAL Retard 100, Tramadol 100mg, Mahwendefa
339, TRAMUNDIN RETARD 100 mg, Tramadol 100mg, Mahwendefa
340, TRAMUNDIN RETARD 150 mg, Tramadol 150mg, Mahwendefa
341, TRAMUNDIN RETARD 200 mg, Tramadol 200mg, Mahwendefa
342, TRANXENE 10, Clorazepate dipotassium 10mg, Makapu
343, TRANXENE 5, Clorazepate dipotassium 5mg, Makapu
344, TREXAN 50, Naltrexone HCL 50mg, Mahwendefa
345, TRISEQUENS, Oestradiol 2mg (yebhuruu tebhu), Oestradiol 2mg, Norethisterone acetate 1mg (chena tebhu), Oestradiol 1mg (tafura tsvuku), Mahwendefa
346, TRISEQUENS forte, Oestradiol 4mg (yero tebhu), Oestradiol 4mg, Norethisterone acetate 1mg (chena tebhu), Oestradiol 1mg (tafura tsvuku), Mahwendefa
347, TRYPTIZOL 25, Amitriptyline HCL 25 mg, Mahwendefa
349, TUSSIFIN ine codeine, Codeine phosphate 75mg Chlorpheniramine maleate 25mg, Glyceryl guaicolate 1gm, Sodium benzoate 3gm, Potassium citrate 3gm, Liquorice 7.5gm / 100ml
350, ULTIVA 1mg, Remifentanil 1mg / vial, In injion
351, ULTIVA 2mg, Remifentanil 2mg / vial, In injion
352, ULTIVA 5mg, Remifentanil 5mg / vial, In injion
355, VALIUM, Diazepam 10mg / 2ml, In injion
356, VALIUM 10, Diazepam 10mg, Mahwendefa
357, VALIUM 2, Diazepam 2mg, Mahwendefa
358, VALIUM 5, Diazepam 5mg, Mahwendefa
359, VECURONIUM BROMIDE YOKUTENGESA 10mg, Vecuronium Bromide 10mg / 1 vial, Powder yeIn injion
360, VECURONIUM BROMIDE YOKUTENGESA 20mg, Vecuronium Bromide 20mg / 1 vial, Powder yeIn injion
361, VESANOID 10mg, Tretinoin 10mg, Makapu
362, VIRORMONE 10mg, Testosterone Propionate 10mg, In injion
363, VIRORMONE 10mg, Testosterone Propionate 10mg, Mahwendefa
364, VIRORMONE 25mg, Testosterone Propionate 25mg, Mahwendefa
365, VIRORMONE 25mg, Testosterone Propionate 25mg, In injion
366, XANAX 0.25, Alprazolam 0.25 mg, Mahwendefa
367, XANAX 0.5, Alprazolam 0.5 mg, Mahwendefa
368, XANAX 1, Alprazolam 1 mg, Mahwendefa
370, ZOLOFT, Sertraline 50mg, Mahwendefa
371, ZYPREXA 10 mg, Olanzapine 10 mg, Mahwendefa
372, ZYPREXA 10 mg, Olanzapine 10 mg, In injion
373, ZYPREXA 5 mg, Olanzapine 5 mg, Mahwendefa
374, ZYPREXA 7.5 mg, Olanzapine 7.5 mg, Mahwendefa
HURUMENDE DZESHUMAI / DZIMA
Abu Dhabi Municipality Gurukota reCabinet
Ajman Chamber yeCommerce & Indasitiri Kuronga Commission
Dubai Civil Kudzivirirwa Dhipatimendi re Atomic Energy
Dubai Chamber of Commerce & indasitiri Ministry of Chemical & Fertilizer
Federation ye UAE Makamuri eCommerce & Indasitiri Ministry of Commerce neindasitiri
Ministry of Electricity & Mvura Ministry of Corporate Affairs
Bazi rezveHutano Ministry of Consumer Affairs & Veruzhinji Distribution
Ministry of State yeCabinet Affairs Ministry of Tsika
Ministry of Education & Vechidiki Ministry of Disinvestment
Ministry of Finance & Maindasitiri Ministry of Environmental uye Masango
Ministry of Planning Ministry of Kunze Kunze
Sharjah Municipality Bazi rezveMari
Sharjah Chamber of Commerce & indasitiri Ministry of Chikafu Kugadziridza Maindasitiri
UAE Hurumende Ministry of Hutano uye Hwemhuri Hupenyu
UAE-INDIA Hukama hwehukama
Iyo UAE's zvehupfumi, zvematongerwo enyika uye zvehukama zvinosangana neIndia, izvo zvinodzokera kune anopfuura makore zana apfuura, akaomeswa uye akasiyana-siyana. Kutengeserana kwemabhizinesi kwange kuchikura zvishoma nezvishoma pamusoro pemakore uye vanhu-kune-vanhu kutaurirana vari kuramba vachiwedzera. Vashanyi vanobva kumativi ese vari kushanya kuzorora uye mafaro, uye nekuwedzera uye zvizvarwa zveUU zvevanhu zviri kuwanira hutano hwehutano uye nzvimbo dzekushanya muIndia.
Vedyo zvibvumirano pakati penharaunda yeIndia uye vagari vemo vanogona kutongwa kubva panharaunda yekuti nharaunda yeIndia ndiyo yakakura kwazvo vatorwa munharaunda yeAUE, vanosvika zviuru zvemamiriyoni 1.5 Zvisungo zvine hushamwari hwehukama pakati peUAE neIndia zvakagadzirirwa kuverengera kusimbiswa uye kusimbiswa mumwedzi uye makore anotevera.
Zviratidzo zvekubvunzana neIndia Mumiriri kune UAE Talmiz Ahmed.
Hukama pakati peUAE neIndia hwakasimba uye hwakavakirwa patsika tsika pakati pevanhu venyika mbiri idzi. Ndedzipi hupi hukama hwemberi hunosungira nyika mbiri uye ndeapi matanho matsva ekusimbisa tsika nemagariro zvisungo?
India-UAE hukama huri pane iko kusimudzira. Nyika mbiri idzi dzinogovana zvisungo zvehukama hwehukama uye zvine hukama hwakasimba hwezvokutengeserana uye hwetsika. Matayi edu ekuwedzera anofukidza huwandu hwakazara hwehupfumi, hunyanzvi, hwemagariro uye hutsika hune hunhu hunobatsira kune vaviri vanhu.
Chinangwa chekudyidzana kuri kuwedzera kweIndia nenyika dzeGulf, kunyanya UAE, kwakapihwa nekushanya kweGurukota rezvekunze, Shaikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan kuIndia munaChikumi. Munguva yekushanya, mativi ese aive nemichero uye hurukuro dzakakura pazvinhu zvakasiyana, kusanganisira hukama hwenyika, mamiriro emudunhu, kuchengetedza, kudzivirira uye simba rinowedzeredzwa. Kubva kudivi reIndia, iye aimbova Gurukota rezvekunze, Pranab Mukherjee uye Gurukota rezvemaindasitiri nehunyanzvi Kamal Nath vakashanyira UAE muna Chivabvu naApril 2008, zvichiteerana.
Hukama hwedu hahuna kucherechedzwa nekutengeserana uye hupfumi zvikamu zvega. MaIndia aivapo muAU nguva refu mafuta asati awanikwa uye vakaita basa rakakura mukusimudzira nyika. Vanga vari vanobatirana vanobatirana neveEmirati yavo. Vatungamiriri veAUE panguva dzinoverengeka vakabvuma mipiro yakagadzirwa nemaIndia mumativi akasiyana.
Ndezvipi zviri kukura muminda yebhizimusi nekutengeserana pakati penyika mbiri?
India neUAE vari kuita nhare dzakasimba kuvandudza nekusimbisa hukama hwenyika nehupfumi hwehukama. Hukama pakati penyika mbiri idzi hwakashanduka mukubatana kwakakosha mune zvehupfumi nekutengeserana nzvimbo, neAEE ichitobuda seyechipiri musika mukuru wepasirose kune zvigadzirwa zveIndia. Panguva imwecheteyo, maIndia akabuda savatengesi vakakosha muUSA, neIndia senzvimbo yakakosha yekuendesa kunze yeiyo UAE zvinhu zvakagadzirwa.
Yaive sei nzira mbiri yekutengeserana pakati penyika mbiri dzakapfuura gore? India-UAE kutengeserana kusiri kwemafuta kwakakoshesa madhora 29,023.68 mu2007-2008. Iyo nzira mbiri yekutengeserana ye2007-2008 yakaratidza kukura kwe40 muzana kupfuura gore rapfuura. Izvo zvinhu zvikuru zvekutengesa kubva kuIndia zvinosanganisira zvicherwa zvemafuta, zvepanyama kana zvakasarudzika maparera, zviyo, matombo akavezwa, zvishongo zvemurume, machira, simbi, yoni yekotoni, zvigadzirwa zvegungwa, michina uye michina, zvigadzirwa zvepurasitiki uye linoleum, tii uye nyama uye kugadzirira. Zvinhu zvikuru zvekupinza kubva kuUSA zvinosanganisira mineral fuels, mineral oiri, yakasarudzika kana yakakoserwa maparera, anokosha kana semi-akakosha matombo, simbi ores & simbi chakafunuka, sarufa uye isina kuvharwa iron pyrites, michina yemagetsi uye michina uye zvikamu zvaro, iron nesimbi nezvimwe.
Chikamu chakakura chekutumira kweIndia kuAU chinotamiswa kubva kuDubai kuenda kune dzimwe nyika mudunhu rakadai sePakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Yemen uye, kunonoka, kunyangwe kuenda kuEast Africa nyika. Nekudaro, kutumira kune nyika kune UAE, zvave kuita, kuzarura musika muhombe wedunhu yezvigadzirwa zveIndia.
Pane chimwe chiyero chekuwedzera kukura mukutengeserana kwemaindasitiri pamwe nekudyara kwakabatana pakati penyika mbiri idzi?
Kuwedzera kwakasimba kwekutengeserana kwedu kwakabatana, zvikuru mune iyo isiri-mafuta chikamu, chiratidzo chekukura nekudzika kwehupfumi hwacho huviri. Makambani eIndia neAUE ari kushingairira kutsvaga mari uye mapurojekiti munyika dzese. Iyi nzira yekudyidzana yemubatanidzwa inosanganisira mamwe emakambani akakosha kubva kuIndia akadai saTata, Reliance, Wipro, NTPC, Larsen & Toubro, Dodsals naPunj Lloyd. Kubva parutivi rweEmirati, makambani epamusoro anoshanda muIndia ndeEmaar, Nakheel, DP World, nezvimwe munaGumiguru gore rakapera, MoU pakati peUAU University neIndia yeAtul Limited yakasainwa kuitira hukama hwekudyidzana kwekutamisa tekinoroji kumisikidza nyika- ye-iyo-zuva zuva muchindwe toni tsika yekugadzira unit muRajasthan.
Ndeipi nhamba inofungidzirwa yeIndia vanhu uye mabhizinesi muAFA?
Zvinofungidzirwa kuti vangangoita mamirioni 1.5 maIndia anogara muUAE. Havasi vazhinji vakasiya nyika munguva yakapfuura. Dambudziko repasi rese rakangobatsira kusimbisa kutama kubva mukufungidzira zvisina basa pasina kukanganisa kwakanyanya simba rakanyanya, simba nezvivakwa zvinowanikwa munyika, kunyanya kuDubai uye Abu Dhabi, sezvo mari iripo nyore dzakadaro nyika-dzakabatana zvirongwa. Nekudaro, dambudziko razvino rezvehupfumi haritombo kukwanisa kuve neakakosha kukanganisa basa revaIndia.
Ndeipi mamiriro ekushanya pakati penyika mbiri idzi?
Bazi rezvekushanya ndeimwe yenzvimbo dzine mukana wakanaka wekukura mune ramangwana, kunyanya kushanya kwekurapa. Emiratis kuenda kuIndia vatova kushandisa hutano hwehutano hwemuIndia, kusanganisira iyo ayurvedic inovakwa uye spas. Imwe nzvimbo ine huwandu hwakakura hwekubatana mukushanya kuvaka uye kugadzirisa mahotera. Kune chiyero chakanaka chekuti UAE ichengete mari muinopfuura-ese mafashoni muIndia, izvo zvaizobatsira kukwevera vashanyi vanoshanyira UAE kuIndia zvakare.
Pachave nehunyanzvi hutsva, hwakasimba, danho muUSA-India hukama mune ramangwana?
Ichiratidza huchokwadi hwenyika, hukama pakati peIndia neAUE vari kuwana danho nyowani. Nyika mbiri idzi dzakatanga kudyidzana kwakasimba mumunda wezvekutengeserana nekutengeserana. Uku kudyidzana kuri kuwedzera, kuchinjisa uye kubuda mushandirapamwe yekudyidzana nekusimbisa kushandira pamwe mukudzivirira, simba, nezvimwe. UAE semuvakidzani achazotarisirwa pamberi mukukwidziridza zvisungo zvedu.
Nyika dzose dziri mbiri dzinogona kushandira pamwe pamwe padziviriri uye mudunhu mune zvokudzivirira uye zvekuchengetedza uye vobatana muhondo yepasi rose mukurwisa ugandanga uye kunyanyisa.
Sezvo UAE ichitarisa pane maindasitiri ane ruzivo uye neIndia ichibuda sevatungamiriri venyika vari muchadenga, zvekurima, zvemishonga uye bio-tekinoroji, kune mukana mukuru wekudyidzana mukutamisa tekinoroji, R&D uye pamwe nekubatana. Dziviriro yekudzivirira yakasvika padanho nyowani neyekutanga India-UAE yemhepo kurovedza uye wechipiri India-UAE Joint Kutaurisa Dhipatimendi reMubatanidzwa. India yakawana kutsigirwa kwakasimba kweiyo UAE padivi pane nyaya yehugandanga, kunyanya pakanangana neyeMagandanga ekurwisa kwaNovember gore rapfuura.
Ehupfumi & Kutengeserana
Kutengeserana kwemaitiro pakati peIndia neAEA kuve kuripo kubvira kare. Kukura Indo-UAE hukama hwehupfumi nekutengeserana zvinopa kugadzikana kwakakosha uye simba kune hukama hwenyika mbiri pakati penyika mbiri idzi. Iyo UAE inonakidzwa nehupamhi uye hwakazara hukama hwehupfumi neIndia, zvichienderana nekudyidzana.
Iyo iripo yemabhizimusi ekutengeserana vhoriyamu inotaurira kuti ino inguva inonakidza munhoroondo ye UAE-India hupfumi hukama. Zvinoenderana nehurumende yeIndia manhamba UAE ndiye mutengesi wepamusoro wekuIndia wegore rezvemari 2008-09, panguva imwe chete Iyi nhamba yehurumende yeAU inoratidza India semumwe wavo wepamusoro wekutengeserana mu2008.
Maererano nehurumende yeIndia manhamba, kutengeserana kwakabatana pakati peIndia - UAE kwegore rezvemari Kubvumbi 2008 - Kurume 2009 yaive US $ 44.53 bhiriyoni kana ichienzaniswa neUS $ 29.11 bhiriyoni panguva imwe chete iyi munaApril 2007- Kurume 2008, kuwedzera ne52.95% . Zvinoenderana nehuwandu hwehurumende yeUAE, mu2008 iyo UAE - kutengeserana kwevaviri kwakakwira 48 muzana kubva ku2007 kusvika panosvika USD 32 bhiriyoni, kuverengera 15 muzana yezana yeEmirates kutengeserana kwekunze.
Kutengeswa kweIndia kuAU kunonyanya kusanganisira mabwe uye zvishongo, miriwo, michero, zvinonhuwira, zvinhu zveinjiniya, tii, nyama pamwe nekugadzirira kwayo, mupunga, machira nezvipfeko nemakemikari. Zvimiro zveIndia kubva kuAEE zvinonyanya kusanganisira zvisakara & zvigadzirwa zvemafuta, goridhe & sirivheri, maparera, mabwe anokosha uye anonamatira, simbi ores & simbi tsvina, zvinhu zvemagetsi nemidziyo yekutakura.
UAE Investment muIndia yakapupurirwawo kukura kwakakura mumakore achangopfuura. UAE yakaisa mari pamusoro peUS $ 5 bhiriyoni muIndia kuburikidza neFDI (Kunze kwenyika Direct Investment) uye FII (Zvekunze Institutional Investors) nzira izvo zvinoita kuti UAE ndeimwe yepamusoro mari muIndia. Makambani makuru eUAE akadyarwa muIndia ndeDP world, Emaar Group, Al Nakheel, ETA Star Group, SS Lootah Group, Emirates Techno Casting FZE, RAK Investment Authority, Dam jewelery uye Abu Dhabi Commerce Bank.
India zvakare iri yechitatu yakakura investor mu UAE. Makambani eIndia akadai seL&T, Punj Lloyd, Hinduja Group, Pioneer Cement, Oberoi Boka reMahotera, ane zvirongwa zvine mubato muUAE. Zvichitevera kubuda kweAU seimwe nzvimbo huru yekutengesazve kunze kwenyika, makambani eIndia akabuda savaridzi vakakosha munzvimbo dzakasununguka dzekutengesa dzakadai seJebel Ali FTZ, Sharjah Airport, Hamariya Free Zones ne Abu Dhbai Industrial City.
Icho chikonzero chinoshamisa cheiyo yakasimba Indo-UAE hupfumi hwehupfumi hwakakura huwandu hwevatorwa veIndia muAEE. Anenge 2 mamirioni ekudzingirwa maIndia parizvino anogara uye anoshanda muUAE, anosanganisira anopfuura 30 muzana muzana renyika yenyika uye anogadzira boka reEmirates 'guru revatriate. Idzo nharaunda inoendesa kune hupfumi hweIndia. Mari yakadzoserwa kuIndia kubva kuUSE mu2008-09 yaive USD 10 -12 bhiriyoni, iyo iri chikamu chimwe muzvitatu chezvose kubviswa kubva kunyika dzeGCC kuenda kuIndia iyo iri pedyo neUS $ 32-25 bhiriyoni.
Mhepo Inobatanidza pakati penyika mbiri
Kune anopfuura anopfuura 475 ndege vhiki imwechete pakati akasiyana siyana kuenda kuIndia uye UAE, yakagovaniswa Emirates, Etihad, Air Arabia, Kingfisher, Jet Airways, Air India uye Air India Express. Kunze kweizvi zvitatu ndege dzeAU dzenyika (Emirates, Etihad uye Air Arabia) dzinoshanda nendege dze304 pasvondo izvo zvinomiririra anenge 64% yendege dzakazara dzinoshanda mune ino chikamu.
India neUnited Arab Emirates zvakare vane Chibvumirano cheAir Services (ASA). Chibvumirano chinobvumira nyika dzese kusarudza chero nhamba yendege yekushandisa masevhisi akatenderana ayo nyika inopa mvumo uye mvumo.
Dzidzo & Kubudirira
Simbisa kushandira pamwe pakati peUAE inowedzera sosi dzidzo nemayunivhesiti eIndia uye yepamusoro masosi ekutsidzira. Kurudzira kubatana kwesainzi, kusanganisira munzvimbo dzesimba rekuvandudza, budiriro inosimudzira, kurima kwakawomarara, zvipenyu zvegwenga, kuvandudzwa kwemadhorobha nehutano hwepamberi.
Sheikh Zared - Mutungamiriri Anotangisa
His Highness Sheikh Zared bin Sultan Al Nahayan, muvambi weUnited Arab Emirates, akaberekerwa mu1918 mu Abu Dhabi. Iye aive wekupedzisira pavanakomana vana vaSheikh Sultan bin Zayed, akatonga Abu Dhabi kubva ku1922 - 1926. Sheikh Zayed akatama nemhuri yake kubva ku Abu Dhabi kuenda kuAl Ain, kwaakanowana dzidzo yake yekunamata uye akadzidza misimboti yeIslam ndokudzidza Holy Qur'an. Sheikh Zared aifarira zvemanyepo uye ainakidzwa nekuvhima uye mimwe mitambo yechinyakare sedzemakamera uye kumhanya kwemabhiza.
Mu1946, Sheikh Zared akagadzwa mutongi kunharaunda yekuMabvazuva yeA Abu Dhabi (Al Ain) uye mumakore iwayo e20 aakapedza semutongi weAl Ain, haana kusiya kuedza kukudziridza uye kushandura misha yenzvimbo iyi.
Mu1966, Sheikh Zared akave Mutongi we Abu Dhabi uye achishanda mukuvandudza emirate, kuvaka zvikoro, zvipatara nemigwagwa, pfungwa yake yezvematongerwo enyika uye maonero ake eramangwana akatendeudzira kuumba kubatana pamwe nevavakidzani vemitambo yeArabian Gulf. Ndiye aive wekutanga kudana kuumbwa kweUnited Arab Emirates nekukurumidza mushure mekunge Britain yazivisa kuti ichabviswa mudunhu iri. Musi waDecember 2 nd, 1971, Sheikh Zared pamwe nevatongi vevatanhatu vekuvakidzana emirates vakazivisa pamutemo kuti United Arab Emirates uye hope dzaSheikh Zared dzakazoitika.
Kubva pakagadzwa, Sheikh Zayed akashanda pamwe nehama dzake, ivo vatongi vemauto, pakugadzirisa nyika nekuchinjisa kuva imwe yenyika dzakabudirira kwazvo mudunhu iri. Akashandisa nehungwaru maratidziro emafuta emunyika kusimudza mararamiro evagari nevagari veAFA nekuvapa hupenyu hwese. Uchenjeri hwaSakhile Zared hwezvematongerwo enyika uye maonero ane hunyanzvi akanzwika mukati nokunze kwenyika. Iye akagamuchira kusingaenzaniswi kudunhu uye kune dzimwe nyika kuzivikanwa uye kuremekedzwa.
Sheikh Zared akashaya munaNovember 2 nd 2004, asi iye achiri mupenyu mundangariro dzenyika dzevatungamiriri vakuru uye mumoyo nepfungwa dzevanhu vake kuzvizvarwa zvinotevera.
United Arab Emirates inyika yakazvimirira yemubatanidzwa, iyo yakagadzwa mu1971. Kuedza kwakabvumiranwa kwehurumende yayo kunoitwa kuitira kusimudzira budiriro ye UAE uye kufambira mberi munzvimbo dzese uye kupa hupenyu hwakanakisa kune vese vagari veAU.
Wake Highness Sheikh Khalifa Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan akasarudzwa semutungamiriri weUnited Arab Emirates pa3rd yaNovember, 2004 mushure mekufa kwababa vake baba HH ​​Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, vaive mutungamiri wekutanga weAU .
Zvitoro zveMutungamiri weUAE
Tungamira dare repamusoro uye gadzirisa hurukuro dzaro
Shevedzai dare repamusoro kuti riitirwe musangano uye muvashongedze sekuenderana nemitemo yehurongwa hwakabvumidzwa nekanzuru mukutema kwavo kwemukati. Kanzuru inofanirwa kushevedzwa kuti iite musangano pese painenge ichikumbirwa nemumwe wemitezo yayo.
Dana musangano wekubatana nedare repamusoro uye nemakurukota ehurumende pese pazvinenge zvakakodzera.
Saina uye bvisa mitemo yemubatanidzwa, zvirevo, uye sarudzo dzakatungamirwa nedare repamusoro.
Sarudza mutungamiriri, gamuchira chigaro chake, uye ngaasiye chinzvimbo chake paine mvumo yedare repamusoro, sarudza mutevedzeri wegurukota uye makurukota, vagamuchire chigaro chavo uye vavakumbire kuti vasiye chigaro chavo pamusoro pezvavarirwa nemukuru. gurukota.
Sarudza vamiriri vekumiririra mubatanidzwa wenyika dzekunze nevamwe vakuru vehurumende yemubatanidzwa, uye vashandi vemauto kunze kwemutungamiriri nevatongi vedare repamusoro soro, vanotambira kusiya basa kwavo uye ndokuvakumbira kusiya chigaro pakubvumidzwa kwedare remakurukota. Kugadzwa kwakadaro, kubvuma kusiya basa kana kudzingwa kunoitwa Zvinoenderana nemirairo uye mukuteerana nemitemo yemubatanidzwa.
Kusainwa kwemavara ekuremekedza vamiriri veMubatanidzwa kumatunhu ekunze nemasangano uye nekugamuchira humbowo hwevamiriri uye vamiriri vedzimwe nyika dzekunze kumubatanidzwa uye kugamuchira tsamba dzekutenda. Anofanirawo kusaina magwaro ekugadzwa uye kutendwa kwevamiriri.
Tarisa kuurayiwa kwemitemo yemubatanidzwa, zvirevo uye zvisarudzo kuburikidza nehurumende yemubatanidzwa uye makurukota anokwanisa.
Miriri wemubatanidzwa mukati menyika nekune dzimwe nyika uye mukudyidzana kwenyika dzese.
Shandisa kodzero yekuregererwa kana kudzikiswa kwechirango uye bvumidza mutongo wakakura maererano nezvinopihwa mubumbiro nebumbiro remitemo.
Kupa zvekushongedza uye menduru dzekuremekedza, zvese zvechivanhu nevemauto, zvichienderana nemirairo ine chekuita nekushongedza kwakadaro uye menduru.
Chero rimwe simba rakapihwa maari neDare Repamusoro kana rakapihwa masimba mukuenderana neBumbiro iri kana mitemo yemubatanidzwa.
Biography yeKukwirira kwake Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
Wake Highness Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan ndiye wechipiri purezidhendi weUnited Arab Emirates, kumisikidzwa kwake kwakaziviswa pa2 nd yaDecember, 1971. Iye ndiye gumi nematanhatu mubati wehwamanda ya Abu Dhabi, ndiye mukuru pane manomwe emirates anoumba mubatanidzwa.
Hukuru hwake hwakatora mubatanidzwa wechiremera seMutungamiri weUAE uye ndokuva mutongi wevanamiriri ve Abu Dhabi pa 3 rd yaNovember ye2004, achitevera baba vake vanopera, Sheikh Zared Bin Sultan Al Nahyan uyo akafa pa2 nd yaNovember ye2004.
Ukuru hwake hwakazvarwa mu1948 mudunhu rekukumabvazuva kweIm Abu Dhabi uye akawana dzidzo yake yepuraimari muguta reAl Ain, rinova iro renzvimbo yekutonga. Iye ndiye mwanakomana mukuru weyekupedzisira Sheikh Zared Bin Sultan Al Nahyan uye amai vake ndiHake Highness Sheikha Hissa Bint Mohammed Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan.
Hunhu Hwake hukuru ndewedzinza reBani Yas, iro rinofungidzirwa kuti nderaanamai vemadzinza mazhinji evaArab ayo akagara mune inozivikanwa nhasi seUnited Arab Emirates. Dzinza iri rakatungamira mubatanidzwa kubva kumadzinza eArab, ayo anozivikanwa se "Bani Yas Alliance".
Kukudzwa kwake kwakateerana naiye baba vake vanopera, Sheikh Zared Bin Sultan Al Nahyan mumatanho ese ehupenyu hwake hwese. Chikamu chekutanga chaakashanda chaive "mumiriri wemumiriri mudunhu rekumabvazuva, uye mukuru wedare ipapo" pa18 th yaGunyana, 1966. Iyi chinzvimbo yaive yakakosha kwazvo muhupenyu hwake. Panguva Yekumusoro kwake pavaigara muguta reAl Ain, akapiwa mukana wakakura wekuti asangane nevagari vemunyika yeUA zuva nezuva, kunyatsoziva mamiriro avo uye kuziva zvavanoshuvira uye tariro.
Ukuru hwake hwakagadzwa semuchinda weaishandira wa Abu Dhabi pa1 st yaFebruary, 1969 uye mukuru wedhipatimendi redziviriro. Nekuda kwenzvimbo iyi, akafunga hutungamiriri hweuto rekudzivirira mune emirate uye akaita basa rakakura mukukudziridza kwake uye kurishandura kubva kuuto diki rekuchengetedza rine simba rekushandisa iro riine nazvino michina.
Pa 1 st yaMay, 1971, His Highness Sheikh Khalifa akabata chinzvimbo che "purezidhendi wedare remakurukota remunharaunda rekutanga kwa Abu Dhabi" uye akafungidzira madhipatimendi ezvekudzivirira uye emari kukanzuru iyi.
Kutevera kuziviswa kwemubatanidzwa, Hwekumusoro hwake akaramba achiwedzera pabasa rake repanzvimbo chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri wedare remakurukota ehurumende yemubatanidzwa, iyo yakaumbwa muna Zvita we 1973.
MunaFebruary we1974, uye zvichitevera kuburitswa kwekomisheni yemunharaunda, Kusimudzira kwake kwakave mutungamiri wekutanga wekanzuru yakatsiva kanzuru yeemirate inosanganisira mabasa ayo ese.
Munguva yekugadzwa kwake semutungamiriri wedare remakurukota, Hukuru hwake hwaitarisisa uye nekutevera zvirongwa zvebudiriro zvakapupurira kumatunhu ese eI Abu Dhabi. Zvakare, Hukuru hwake hwakapa tarisiro huru kukudziridzwa nekuvandudzwa kwemaprojekiti ezvekuvaka pamwe nezvivakwa zvemabasa akasiyana siyana. Akarangarirawo kuvaka zvishandiso zvemazuva ano zvekushandisa, uye zvakanyatsobatanidzwa pamitemo, sezvo ichi chiri hwaro hwakasimba hwesarudzo yemagariro pamwe nehupfumi.
Kunze kwemabasa ake semutungamiri wedare repamusoro, Hukuru hwake hwaitarisira kumisikidzwa uye semutungamiri we Abu Dhabi Investment Authority mu1976. Ichi chiremera chinotarisira manejimendi ekudyara kwemari yemasimusi sechikamu chechiratidzo chekuona kuvandudza kwezviwanikwa zvemari uye kuchengetedza sosi yakagadzikana yemari yezvizvarwa zvinotevera.
Chimwe chezvinhu zvikuru zvekuvandudza chirongwa chakakomba chakaitwa neWekumusoro-soro ndechekumisikidza masangano ezvekudyidzana nevamwe uye zvivakwa zvebhizimusi, izvo zvinowanzozivikanwa se “Sheikh Khalifa Committee” Mabasa edhipatimendi akabatsira mukubudirira kwegadziriro yekuvaka munzvimbo yekudyara ya Abu Dhabi.
Hukuru hwake zvakare akafungidzira chinzvimbo chemutevedzeri wemutungamiriri mukuru weAE Mauto Echiuto ehurumende yemubatanidzwa, uko akapa hunyanzvi uye kuwedzera kufarira mauto ane mauto. Pakati peiyo nguva, kusvetuka kukuru kwakaitika padanho rekutakura, kudzidziswa uye kugona kutora zvigadzirwa zvemazuva ano uye hunyanzvi hwekuvandudza hwakakwenenzverwa neKumusoro kwake kupa kumatunhu ese emasimba akadaro.
Mupiro wakakosha unoitwa neWekumusoro-soro munzvimbo yekugadzira chitendwa chechiuto, izvo zvakavakirwa pamakomendi ehurongwa hwepamusoro hwenyika. Iyi bumbiro repamusoro inoenderana nekutora nzira ine mwero, isiri yekupindira yeimwe nyaya nekuremekedza kwezvavanofarira zvakafanana. Tichifunga nezvemakanzuru aya, Wekumusoro-soro haana kuponesa zvakaitwa mukunyora mutemo wekudzivirira unochengetedza rusununguko, hutongi uye kufarira nyika. Iyi danho yakabatsira kuisa iyo UAE Mauto Echisimba munzvimbo yepamusoro iyo yakawana kuremekedzwa kwepasirese.
Mushure mekutungamira kwake kutora chigaro, chirongwa chekutanga chehurumende ye UAE chakavambwa pasi pehutongi hwake. Pamusoro pezvo, Kukudzwa kwake kwakatangawo chirongwa chekuvandudza ruzivo rwematare kuitira kuti vagadzirise maitiro ekusarudza nhengo dzedare rekanzuru nenzira iyo inosanganisa kusarudzwa uye kugadzwa sedanho rekutanga. Nekuita izvi, izvi zvinopa mukupera kwezuva mukana wekusarudza nhengo dzekanzuru kuburikidza nesarudzo zvakananga.
Ukuru hwake hunofarira mune zvemitambo zviitiko zvinoitwa muAFA, kunyanya nhabvu. Anoyedza kuvatsigira uye kukudza zvikwata zvemitambo zvemuno zvinowana zvibodzwa zvemuno, zvematunhu uye epasi rose zvibodzwa.
Hukuru Hwake Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Wake Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum akafungidzira hurumende yemubatanidzwa masimba seMutevedzeri weMutungamiriri uye Mutungamiriri weUAE muna Ndira 5 th, 2006 mushure mekusarudzwa nenhengo dzeFederal Supreme Council nevatongi veEmirates. Kubva panguva yekugadzwa kwake, hurumende yemubatanidzwa yeUAE yakaona kukwidziridzika kunoshamisa kweiyo nhanho yekubudirira pamwe nekukura kwakakura muhuwandu hwehurongwa hwehurumende yemuno neyekunze mukufunga kweYe Highness inotarisana nekudyara zviwanikwa zvemubatanidzwa zvakanyanya uye zvakaringana. .
Zvakare, Hukuru hwake hwakatangisa chirongwa chekutanga cheHurumende muUSA musi waApril 17 th, 2007, iyo inotarisira kuzadzikisa budiriro yenyika, mukutarisisa mashandiro ehurumende yemubatanidzwa nekuona kuzvidavirira nenzira yakajeka kune zvakanaka zverudzi uye vagari vemo.
Mabasa eAUE Mutevedzeri weMutungamiriri
Mumiriri weUAE anoita mabasa ese emutungamiri weAU mukupedzisira kwekushaiwa chero chikonzero.
Biography yeKukwirira kwake Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Musi waNdira 4th, 2006, Hwake Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum akave Mutongi weDubai zvichitevera kufa kwaPaul Maktoum bin Rashid Al Maktoum.
Kubva zvavakaita Deputy President uye Prime Minister weUAE, uye Mutongi weDubai, nzira dzekuparadza dzakaparurwa zvakanyanya.
Mwaka 2007 yakazvionera zvakasarudzika zvakawanikwa naSheikh Mohammed zvese munharaunda nharaunda. Musi waApril 17th, 2007, Sheikh Mohammed akazarura chirongwa cheU.S. Hurumende nechinangwa chekusimudzira budiriro munyika yese, nekudyara zviwanikwa zvemubatanidzwa zvakanyanyisa uye nekuona kushingairira, kuzvidavirira uye kubuda pachena pamasangano emubatanidzwa.
Chinangwa ndechekusimudzira kusimudzira kwevanhu nekudyara mune dzidzo nekusimudzira ruzivo munharaunda nekuvandudza vatungamiri mune ramangwana muzvikamu zvakavanzika uye zveveruzhinji, kukurudzira ongororo yesainzi, kuparadzira ruzivo, kukurudzira hutungamiri hwebhizinesi, kupa simba vechidiki, kuvandudza pfungwa ye tsika, kuchengetedza nhaka uye kusimudzira mapuratifomu ekunzwisisa pakati akasiyana siyana.